ILiposomal Vitamin C Production ne-Ultrasonics
Izindlela zokuqamba ze-liposomal ze-biososal ziyaziwa ngokuma kwazo okuphakeme kwe-bioavailability kanye nesilinganiso sokumunca. IVithamini C, i-antioxidant, iyisengezo esivamile esisetshenziswa kwezidakamizwa ezinomsoco nezokwelapha ukusekela amasosha omzimba womuntu uqobo. I-Ultrasonication ithembekile futhi…
Ultrasonic Liposome Ukulungiselela
Ultrasonic Liposome Preparation for Pharmaceuticals and Cosmetics Liposomes (liposome-lipid based vesicles), transosomes (lipadeomesable liposomes), ethosomes (vescles (opade) lapho kusebenza khona…
Amaseli Okugeleza Nama-Inact Reactors we-Lab Ultrasonicators
I-Ultrasonic lab homogenizers ingasetshenziselwa ukuqhutshwa kwe-batch kanye ne-inline uketshezi nama-slurries. Izicelo ezijwayelekile zifaka phakathi i-homogenization, ukuhlakazeka, i-emulsification, ukuncibilika kanye nokusabela kwe-sonochemical. Okwe-sonication okuqhubekayo oku-inline, ukugeleza kwamaseli kanye ne-in-line reactors ngokuhlukahlukene…
I-Artemisinin ingakhishwa kahle kusetshenziswa i-sonication ephezulu yokusebenza. Isizinda se-Ultrasonic sinika isivuno esikhulu kakhulu se-artemisinin sisebenzisa izixazululi ezinyene. Inqubo yokukhipha esebenzisa i-ultrasound ishesha kakhulu. Izimo zokucubungula kuma-extractors e-ultrasonic zilawulwa kahle, okuvumela…
Amapuleti amaMicrotiter, amapuleti ahlukahlukene, amapuleti angama-96-kahle noma amapuleti e-ELISA asetshenziselwa ukulinywa kwesampula nokucubungula amasampula ezinto eziphilayo. Nge-microtiter plate ultrasonicator UIP400MTP, i-Hielscher inikeza isisombululo esiyingqayizivele se-ultrasonic sesampuli efanayo futhi ethembekile…
Ama-Zeolites afaka ama-nano-zeolites kanye ne-zeolite derivatives angahle asebenze kahle futhi enokwethenjelwa ahlanganiswe, asebenze futhi ahlonishwe ngokusebenzisa i-ultrasonication ephezulu yokusebenza. I-Ultrasonic zeolite synthesis kanye nokwelashwa kudlula ukuhlanganiswa okuvamile kwe-hydrothermal ngokusebenza kahle, ubulula, nokuqina okulula komugqa ekukhiqizeni okukhulu. I-Ultrasonically synthesized…
I-Ultrasonic Degassing ne-Defoaming of Liquids
Ukwenza i-degassing nokuchithwa kwamagama oketshezi usebenzisa i-ultrasonic kuyinkqubo ephumelela kakhulu. I-Ultrasonication isusa ama-bubble amancane amisiwe ketshezi futhi inciphisa izinga legesi elichithakele ngaphansi kwezinga lemvelo lokulingana. Ukuchithwa kanye nokuchithwa kwamagama kweziphuzo kuyinto…
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa amasampuli welebhu, ukucubungula kwesikali somshayeli noma ukukhiqizwa okugcwele. Lokhu kufaka amadivayisi we-ultrasonic we-ultrasonication yanoma iyiphi ivolumu yetshezi, kusuka kuma-microliters amaningana ngamakhulu ama-cubicmeters ngehora. Isidingo sokuphatha…
Amadivayisi we-Industrial Ultrasonic
Amadivayisi we-Hielscher ezimboni ze-ultrasonic anamandla, asebenzayo futhi athembekile. Zakhelwe ukusebenza ngokuqhubekayo ngomthwalo omkhulu ezindaweni zezimboni. Ngama-kilowatts afika ku-16 ngedivayisi ngayinye, i-Hielscher ingumhlinzeki ohola phambili we-ultrasonics wezinqubo zamanzi ezimboni. Ultrasonic…
Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory
Amadivayisi we-Hielscher a-ultrasonic elebhu acophelelekile, okusebenziseka kalula futhi ahlukahlukene kakhulu. Zingasetshenziselwa ukucubungula izinto ezahlukahlukene ze-organic ne -organic ezinhlobonhlobo zamavolumu. Izicelo ezijwayelekile zama-homogenizer e-ultrasonic afaka ukulungiswa kwesampula,…
Amafutha we-algae iyi-feedstock eqhubekayo ethokozisayo yokukhiqiza i-biodiesel. Kungenye indlela yokudla okuphakelayo okudumile, njenge-soya, i-canola kanye nesundu. I-Ultrasonication ithuthukisa ukukhishwa kwamafutha kumaseli we-algae nokuguqulwa kwe-biodiesel. Ngokuqhathanisa…
AmaNanotubes eBoron Nitride – Ukukhishwa futhi kuhlakazekile kusetshenziswa i-Sonication
I-Ultrasonication isetshenziswa ngempumelelo ekucutshungulweni nasekuhlakazekeni kwe-boron nitride nanotubes (BNNTs). I-high-intact sonication ihlinzeka ngokufana okufanayo nokusatshalaliswa kuzisombululo ezahlukahlukene futhi ngaleyo ndlela kuyindlela ebalulekile yokucubungula ukufaka ama-BNNTs kuzixazululo nakumatriki. Ultrasonic…
Sulfur-containing compounds in crude oil, petroleum, diesel and other fuel oils include sulfides, thiols, thiophenes, substituted benzo- and dibenzothiophenes (BTs and DBTs), benzonaphthothiophene (BNT), and many more complex molecules, in which the condensed thiophenes are the most common forms.…
Ukunciphisa i-Ultrasonic Viscosity yeProtheni Suspensions ngaphambi kokuSula ukuSula
I-Ultrasonics yikhambi lokuqhakambisa ukusebenza kahle futhi inciphise izindleko zokomisa inqubo yokufafaza ngama-Whey slurries, isib. WPC. Amandla e-Shearing we-Ultrasonic anciphisa ukuvela kwekhambi le-Whey futhi avumele ngaleyo ndlela ukuhlushwa okuphezulu kwamaprotheni. Sawubona…
I-Sonication yamaBhodlela namaKhansela okuThola ukuvuza
Hielscher ultrasound is being used in bottling and filling machines for the on-line container leak testing of bottles and cans. The instantaneous release of carbon dioxide is the decisive effect of ultrasonic leakage tests of containers…
Ukuhlanganiswa kwe-nanoparticles ngama-nanoparticles kukhuthazwa nge-ultrasonically kuyindlela esebenza kahle kakhulu futhi engabizi kakhulu ukukhiqiza ama-nanoparticles aphezulu kakhulu. I-sono-electrochemical synthesis, eyaziwa nangokuthi i-sonoelectrodeposition, ivumela ukulungisa ama-nanostructures wezinto ezahlukahlukene nobubunjwa. I-Sonoelectrochemical Synthesis…
Ukukhiqizwa Kwe-Hydrogen Okusebenzayo nge-Ultrasonics
I-Hydrogen inguphethiloli ohlukile ongathandwa ngenxa yobungani bayo kwezemvelo kanye ne-zero carbon dioxide. Kodwa-ke, ukukhiqizwa okuvamile kwe-hydrogen akusebenzi kahle ekukhiqizeni inqwaba yomnotho. I-electrolysis ekhuthazwa nge-ultrasonically yamanzi nezixazululo zamanzi ane-alkaline…
Lapha uzothola konke odinga ukukwazi mayelana ne-ultrasonic electrochemistry (sonoelectrochemistry): isimiso sokusebenza, izinhlelo zokusebenza, izinzuzo nemishini ye-sono-electrochemical - lonke ulwazi olufanele mayelana ne-sonoelectrochemistry ekhasini elilodwa. Kungani Usebenzisa i-Ultrasonics ku-Electrochemistry? Inhlanganisela yemvamisa ephansi, amandla aphezulu…
Ukukhiqizwa Koshizi Okuthuthukisiwe nge-Power Ultrasonics
Ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zoshizi ezinjengoshizi onzima, ushizi othambile kanye ne-curd, okwenziwe ngohlobo lobisi oluhlukahlukene (isb. Inkomo, imbuzi, imvu, inyathi, ubisi lwekamela njll) kungathuthukiswa kahle nge-sonication. Ukusetshenziswa kwe-high-intensity ultrasound kusheshisa i-homogenization,…
Ultrasonics: Izicelo nezinqubo
I-Ultrasonication ubuchwepheshe obusebenzisekayo bezicelo eziningi, njenge-homogenizing, ukuhlakazeka, ukuhlakazeka, i-sonochemistry, i-degassing noma ukuhlanza. Ngezansi, uzothola izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile nezinqubo. Sicela uchofoze ezintweni zohlu olulandelayo ukuthola eminye imininingwane…
I-Sonoelectrochemistry ihlanganisa izinzuzo ze-electrochemistry ne-sonochemistry. Inzuzo enkulu kulezi zindlela kulula kwazo, izindleko eziphansi, ukukhiqiza kabusha nokukhula. I-Hielscher Ultrasonics inikeza ukusethwa okuphelele kwe-sonoelectrochemical yebatch nokusetshenziswa okusemgqeni. Iqukethe: i-ultrasonic ethuthukile…
I-saponification inqubo yamakhemikhali yokwenza insipho. Ukuphendula lapho okusetshenzisiwe kwamafutha noma uwoyela (triglycerides) kusabela nge-alkali reactant ukuze kwakheke insipho. I-Ultrasonication ithuthukisa ukudluliswa kwesigaba kwe-catalysis okuvelayo…
Isithasiselo se-Hemp ngezinsimbi ze-Ultrasonic
Ukukhishwa kwe-hemp usebenzisa imishini yokukhipha i-solvent solvent kuyindlela elula, engambi eqolo futhi esikali kakhulu yokukhipha i-CBD kusuka ku-hemp. I-Ultrasonic hemp extractors kulula ukuyifaka futhi ingasetshenziswa ekukhiqizeni i-batch noma emgqeni ku-throughput. I-Ultrasonics…
Ama-UltraSonicators wokuhlola i-ASTM D2603 Shear Stability
Izinga le-ASTM D2603 lichaza ukuvivinywa kokuqina kokugcwala kwe-sonic kuketshezi lwe-hydraulic ngaphansi kwengcindezi ye-shear eyenziwe nge-ultra-sonically. Ama-Hielscher ultra-sonicators asetshenziswa njengamadivayisi athembekile okusika i-shear asetshenziselwa ukuhlolwa kwe-shear ukuzinza kwamanzi we-hydraulic ngokuya nge-ASTM…
Ama-Ultrasonicators we-ASTM D5621 Sonic Shear Stability of Hydraulic Fluids
Indlela yokuhlola ejwayelekile ye-ASTM D5621 ichaza ukuhlolwa kwe-sonic shear ukuzinza koketshezi lwe-hydraulic kanye nama-viscosities abo ku-40 ° C no-100 ° C, ngokulandelana. Ukuze uvivinye futhi unqume ukuzinza kwe-viscosity oketshezi lwe-hydraulic ngaphansi kwe-shear, okuthembekile…
Ukukhiqiza Okunenzuzo Kwe-Hydrogel nge-Ultrasonication
I-Sonication iyindlela esebenza kahle kakhulu, ethembekile futhi elula yokulungiselela ama-hydrogel asebenza kahle. Lawa ma-hydrogel anikezela ngezinto ezinhle kakhulu ezifana namandla wokumunca, i-viscoelasticity, amandla womshini, i-compression modulus, kanye nemisebenzi yokuziphilisa. I-Ultrasonic Polymerization kanye nokuhlakazeka kwe-Hydrogel…
I-UIPEVO – I-Ultrasonic Oil Oliver Extractor for Izilimo Eziphakeme
I-UIPEVO ye-Hielscher uhlelo lokukhishwa kwe-ultrasonic ukwandisa isidalwa kanye nesithako sesithako samafutha omnqumo angaphezulu. I-UIPEVO iphatha ukunamathisela komnqumo omnene futhi okungeyona eyokwelapha nge-ultrasound okuholela ekuvuneni okuphezulu nekhwalithi ephezulu. Ngenxa yobumnene…
I-Electro-Sonication iyinhlanganisela yemiphumela kagesi nemiphumela ye-sonication. I-Hielscher Ultrasonics ithuthukise indlela entsha nenhle yokusebenzisa noma iyiphi i-sonotrode njenge-electrode. Lokhu kubeka amandla e-ultrasound ngqo kusixhumi esibonakalayo esiphakathi…
Ukuxoshwa kwe-Ultrasonic ye-Carbon Nanotubes (CNT)
Carbonnanotubes are strong and flexible but very cohesive. They are difficult to disperse into liquids, such as water, ethanol, oil, polymer or epoxy resin. Ultrasound is an effective method to obtain discrete - single-dispersed - carbonnanotubes.…
Ama-ultrasonicators aphezulu kakhulu wezinqubo zokuxuba okusemgqeni anikela ngezinzuzo ezahlukahlukene uma kuqhathaniswa nama-homogenizers ajwayelekile e-colloid. Ukusebenzisa i-ultrasound enamandla amakhulu ukuxuba kunika amandla ama-Hielscher ultrasonic high-shear mixers ukuthi akhiqize ukumiswa okwesikhashana kwe-colloidal kanye ne-emulsions ku-nano-range. Ama-homogenizers asemgqeni we-Ultrasonic…
Ukuqothulwa kwamanzi okususelwa emanzini
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuvumela ukukhiqiza i-graphene enezingqimba ezimbalwa ngaphandle kokusebenzisa ama-solvents anokhahlo kusetshenziswa amanzi amsulwa kuphela. I-sonication enamandla amakhulu ihlanza amashidi e-graphene ngaphakathi kokwelashwa okufushane. Ukugwema izinyibilikisi kuguqula ukukhishwa kwe-graphene kunqubo eluhlaza, eqhubekayo. IGraphene…
I-nanofluid inguketshezi olwakhiwe oluqukethe uketshezi olusisekelo oluqukethe ama-nanoparticles. Ukuze kuhlanganiswe ama-nanofluids, inqubo ye-homogenization ne-deagglomeration esebenza kahle futhi enokwethenjelwa iyadingeka ukuqinisekisa izinga eliphakeme lokusabalalisa okufanayo. Abahlakazeki be-Ultrasonic…
IBiodiesel ihlanganiswa nge-transesterification isebenzisa i-base-catalyst. Kodwa-ke, uma kusetshenziswa izinto ezingavuthiwe ezifana nemifino yemfucumfucu esezingeni eliphansi enokuqukethwe okunamafutha ane-asidi ephezulu, kudingeka isinyathelo samakhemikhali sangaphambi kokwelashwa sokusebenzisa i-acid-catatlyst. Ultrasonication…
Imimoya kanye Notshwala Abakhulile Nge-Ultrasonically
Ama-Distilleries asebenzisa i-ultrasonication esebenza kahle kakhulu ukwenza ngcono ikhwalithi yemimoya e-distilled kungakapheli amahora ngaleyo ndlela yeqa noma inciphise ukuguga komgqomo okudla isikhathi, okuthatha kuze kube yiminyaka eminingana. I-Ultrasonics ikhuthaza ukuphendulwa kwemishini nokwenziwa kwamakhemikhali, okuthatha iminyaka embalwa ngaphansi…
Ukukhishwa kwe-ultrasonic kwe-Water-Dispersible Graphene
I-nanonoet ye-Mono- ne-bi-layer graphene nanosheet ingakhiqizwa ngokushesha nge-exotication ye-ultrasonic nge-throughput ephezulu nangezindleko eziphansi. I-graphene ye-Ultrasonically exfoliated ingasebenza nge-biopolymers ukuze ithole i-graphene engasabalalisi amanzi. Ngokuhamba kwe-ultrasonic, i-graphene eyakhiwe…
Ukukhiqizwa Kwe-Ice Cream Okuthuthukisiwe kwe-Ultrason
Ukusetshenziswa kwamandla e-ultrasound kunemiphumela eminingi ezuzisayo ekukhiqizeni i-ayisikhilimu esezingeni eliphakeme. Izinzuzo ezinkulu ze-sonication zifaka phakathi ukuncishiswa kosayizi we-crystal nokushesha kokubandayo ku-ayisikhilimu. Ngaleyo ndlela, i-ultrasonication iyathuthuka…
I-Electrolysis ye-dilute sulfuric acid ikhiqiza igesi ye-hydrogen negesi yomoya-mpilo. I-Ultrasonication inciphisa ukushuba kwesendlalelo se-diffusion ebusweni be-electrode futhi ithuthukise ukudluliswa kwesisindo ngesikhathi se-electrolysis. I-Ultrasonication ingakhuphula amazinga wokukhiqiza igesi e-hydrogen esitokisini se-electrolytic, kakhulu.…
Ama-Biodiesel Pumps & amathangi
Iithebula elingezansi libala abahlinzeki ngamaphampu namathangi wokwenza i-biodiesel. Amaphampu weBiodiesel Systems Company Pumps PumpBiz Inc. 1955 Shermer Av., Northbrook, IL 60062 Ucingo: 847-291-1357, Fax: 847-589-3935 sale@pumpbiz.com, www.pumpbiz.com Centrifugal Rotary…
Izithelo Ezithuthukisiwe NeGelation Yemifino yi-Ultrasonics
Amasoso aqobayo, amajusi, ujamu nokunye ukudla nge-gelation kuyindlela ejwayelekile ekukhiqizeni ukudla oketshezi. Isizinda se-Ultrasonic sama-pectin noshukela wemvelo we-intracellular ovela kwizithelo nemifino kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhuthaza…
Sonotrodes Ultrasonic, Amaseli Egeleza & Izesekeli
I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza uhla olubanzi lomkhiqizo wezesekeli ze-ultrasonic ze-sonication eqondile nengaqondile yamasampula amancane welebhu ukukhiqizwa okugcwele okuthengiswayo. Thola ngezansi ukubuka konke ngaphezulu kwe-sonotrodes yethu, ukugeleza kwe-reactors nezinye izinsimbi zombili, ziqonde…
Cocoa Shell ezikhishwe nge Power Ultrasound
Imfucumfucu yeCocoa enjengezithelo ze-cocoa izithelo kanye namagobolondo kabhontshisi we-cocoa angavezwa kalula ngokukhipha ibhotela le-cocoa, ushukela wezithelo kanye nama-bioactive compounds. Isizinda se-Ultrasonic siboniswe ukuthi siyindlela esebenza kahle kakhulu yokuhlukanisa izinto ezibalulekile…
Ukukhishwa kwamaprotheni eDuckweed
IDuckweed (iLemna minor) isitshalo samanzi esikhula ngokushesha esinothe ngamaprotheni nezinye izinhlanganisela zokudla okunempilo. Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa njengobuchwepheshe bokucubungula obusebenza kahle kakhulu futhi obunokwethenjelwa ukukhipha amaprotheni, i-lipids kanye ne-phyto-izakhi zomzimba kusuka ku-duckweed. I-Sonication ivumela…
Ukuncishiswa Kwe-Asphaltene nge-Power Ultrasonics
Imvula ye-Asphaltene iqalisa izinkinga eziningi ekukhiqizweni kukawoyela ngokunciphisa ukungena, ngokushintsha ukuthambeka kwamatshe echibini, ukuvinjelwa kahle kanye nokudala ukwehla okukhulu kwengcindezi okuzungeze umkhiqizo kahle. Ultrasonic asphaltene deagglomeration kanye nokusabalalisa kuvimbela futhi…
Ukufaka i-graphene ezingxenyeni eziyinhlanganisela, i-graphene kumele ihlakazeke / isuswe njengamashidi amancanyana ngendlela efanayo ekwakhiweni. Lapho kukhuphuka ibanga le-deagglomeration, ngcono impahla yezakhiwo ezingajwayelekile. Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kunika amandla ukusatshalaliswa kwe-kuyunithi ephakeme…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Extra Virgin Olive Oil
Ukukhishwa nokusizwa kwe-Ultrasonically kusiza ukukhiqizwa kwamafutha omnqumo ayizintombi asebenza kahle. Inqubo yokuqina kwenqubo ye-ultrasonic iholela ekukhiqizeni okuphezulu kwe-EVOO, ikhwalithi ephezulu yokudla okunempilo nokuxubha okufishane. I-Sonication yandisa okuqukethwe kwe-antioxidant ne-polyphenol ku-virgin eyengeziwe…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kanye ne-malaxation kukhulisa isivuno ngenkathi kukhiqizwa uwoyela we-avocado. I-Sonication inqubo emnene engeyona eyamandla futhi lapho kufanelekile ukukhiqiza uwoyela we-avocado ebangeni eliphakeme kakhulu. Ukucindezela kwe-oyela okusiza nge-ultrasonically kuthuthukisa isivuno, kugcina uwoyela ophakeme…
IHydrogen sulfide (H2S) igesi engenawo umbala eyenzeka kawoyela ongahluziwe kanye negesi yemvelo. I-H2S inobuthi, iyagqwala, ivutha amalangabi futhi iqhuma. Ingasuswa ku-oyili negesi ngama-scavenger, i-hydrodesulfurization, i-filtration ye-carbon eyenziwe isebenze noma ukusabela nge…
Ama-dismembrators we-Ultrasonic asetshenziswa kakhulu endaweni yokucwaninga, ebhentshini kanye nasemkhakheni ukulungiselela ukumiswa okungahambi kahle kwama-colloidal anjenge-emulsions nokusabalalisa ngama-droplet noma osayizi bezinhlayiyana ku-submicron- ne-nano-range. Ngaphezu kwalokho, ama-dismembrators e-ultrasonic asetshenziselwa ukuphazamisa iseli,…
I-MultiPhaseCavitator-Faka i-Ultrasonic Flow Cell
The MultiPhaseCavitator Insert (InsertMPC48) is designed to improve the ultrasonic processing of liquid/liquid or liquid/gas mixes. 48 very fine cannulas inject liquid or gas into a liquid phase right in the cavitation zone. This creates very small suspended droplets…
Ama-emulsions we-Pickering aqiniswa izinhlayiya eziqinile. Ama-emulsions we-Pickering akholisa ngohlamvu lwabo "lwe-emulsifier-free" nokuqina kwabo okuthuthukile. I-Ultrasonic iyithuluzi elifanelekile lokwenza i-Pickering emulsions okokuqala isabalalisa izinhlayiya ezizinza esigabeni samanzi futhi okwesibili…
I-Decaffeination engenamakhemikhali ne-Power-Ultrasound
Inqubo evamile yokuphehla ikofi netiye idinga ukusetshenziswa kwezixazululo ezinobuthi. I-Ultrasonic decaffeination iyindlela esebenzayo evumela ukuthi ikhiphe i-caffeine isebenzisa isizinda esisekelwe emanzini ngaphandle kokusebenzisa izinyibilikisi ezinokhahlo. I-Ultrasonic decaffeination iyi-…
I-Sonication ku-Multi-Neck Flasks
I-Sonication isetshenziswa kabanzi ekuphendukeni kwamakhemikhali kanye ne-biochemical. I-Hielscher inikezela ngama-adap emhlabathini ajwayelekile ahlanganisiwe ukuze afake i-sonotrode ye-ultrasonic emikhunjini yokusabela efana namashalofu ayindilinga, amashalofu entambo amaningi namanye ama-waile wengilazi ye-lab. Ukusetha okuyinkimbinkimbi kwe…
Izinqubo ze-Ultrasonic zisetshenziswa kabanzi ezimbonini ezinhlobonhlobo zokuxuba, ukuhlakaza, ukusabalalisa i-homogenisation kanye nokukhishwa. Ngenkathi imiqobelo emincane ingabhalwa kalula kumodi ye-batch, ngoba izinqubo zevolumu ezinkulu zinconywa. I-SonoStation iphelele…
Ukukhiqizwa kwamazinyo kuyinqubo edingayo edinga imishini yokuxuba ekwazi ukuphatha izinto ezinamathisela ezibukekayo, ukugxila okuphezulu okuqinile nezinhlayiya ezilimazayo. Ama-mixer e-shear high-shear ahlinzeka ngamandla amakhulu okushefa okunikeza ukumanziswa okuphelele kwe-powders, i-homogenisation efanayo yama-colloidal slurries…
Ama-Anthocyanins asetshenziswa kabanzi njengombala wemvelo nokongezwa okunempilo emikhiqizweni yokudla. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuthuthukisa ukukhishwa kwama-anthocyanins asezingeni eliphakeme kusuka ezitshalweni okuholela ekuvuneni okuphezulu nenqubo esheshayo. I-Sonication iyindlela emnene, eluhlaza futhi esebenza kahle…
I-Ultrasonic Collagen Extraction kusuka ku-Jellyfish
I-Jellyfish collagen i-collagen ephezulu, ehlukile kodwa ibonisa izinto ezifanayo ukuthayipha i-I, II, III bese uthayipha u-V collagen. Isizinda se-ultrasonic yindlela yokwenza imishini, eyandisa isivuno, ishesha ngokushesha inqubo futhi ikhiqize ama-molecular ephakeme…
I-Collagen inamaprotheni futhi isetshenziselwa kabanzi ezindaweni zokusebenza ezimbalwa, isib. Ukudla, i-pharma, izithasiselo njll. Sonication ingahlanganiswa kalula ne-enzymatic noma i-asidi yesikhumba se-collagen. Ukuqaliswa kwe-ultrasonics kwinqubo ye-collagen extraction…
Ukuqhekeka kwamangqamuzana kuwumsebenzi ojwayelekile ku-biotechnology nasezintweni eziningi ezibandakanya ukucubungula amaseli nezinto ezibonakalayo ze-intracellular. Ama-distrigrators amaseli e-Ultrasonic ayasebenza futhi athembekile, uma kuziwa ekuphuleni udonga lweseli noma ulwelwesi lwamaseli wezitshalo, ama-mammalian…
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kwe-C60 ibe yi-Supplements
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme yokuhlanganisa i-C60 homogeneously kwisengezo esisekelwe kumoyili. Ukwelashwa kwe-ultrasonic okunobumnene, okulawula kahle kuqinisekisa ukuthi ama-molekyuli e-C60 agcinwa angasebenzi kahle ukuthola imiphumela emihle. Umphumela ohlanganisiwe we-nano-ehlelekile we-ultrasonically imiphumela in…
Ultrasonic Isizinda of Ayurvedic Amakhambi
Amakhambi nezinongo aqukethe amakhompiyutha e-bioactive, asetshenziswa njengamakhambi ezenzweni ze-Ayurveda. I-Ultrasonics iyindlela ephezulu yokukhipha izithako ukukhiqiza izingcweti ezisezingeni eliphakeme. Izinzuzo zokukhishwa kwe-ultrasonic ziyizithelo eziphakeme kakhulu, isizinda esisheshayo kanye ne-bioactive complements engonakalisiwe.…
Isizinda se-Ultrasonic Samafutha Odliwayo
Amafutha adliwayo asetshenziselwa izinhlelo eziningi ekwenzeni ukupheka nokwenza ukudla. Ukukhishwa kwemishini kwamafutha adliwayo kuvimbela uwoyela ekuwohlokeni. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwamafutha adliwayo kuyindlela ephakeme kakhulu yokukhipha uwoyela ezinhlanyelweni, izikhwebu nezithelo.…
Kwisitjalo se-cannabis sativa, izinhlobo ezimbili zingahlukaniswa: insangu ne-hemp. I-Ultrasonic yaziwa kakhulu njengendlela ephakeme yokuhlukanisa ama-cannabinoids kubo bobabili, insangu ne-hemp. IHemp vs Marijuana Cannabis ngumndeni wezitshalo ezingakwazi…
Izikhombi zeHenna zisetshenziswa kabanzi emikhiqizweni yezimonyo, yokudla nokunempilo. Indlela yokukhipha i-ultrasonic inyusa isivuno samakhompiyutha asebenzayo afana nama-antioxidants, ama-phenolics, kanye nama-colorants. Ukusebenza kwe-Ultrasonic kuyindlela emnene engeyona eyokwelapha yokuqinisa iHenna…
I-Malting inqubo echitha isikhathi: ukumanzisa nokunisela imbewu yezinhlamvu kuthatha isikhathi esiningi futhi kufinyelela imiphumela engalingani kakhulu. Nge-ultrasonication, isivinini sokuhluma, isilinganiso kanye nokuvunwa kwebhali kungathuthukiswa kakhulu. Ukukhiqizwa Kwe-Malt…
I-Ultrasonic Nano-Encapsulation ye-Ivermectin
Izidakamizwa ezinje nge-avermectin ne-ivermectin zivame ukufakelwa kwizithwali zezidakamizwa ezingekho nano ukuze zithuthukise isilinganiso sokuncipha kanye ne-bioavailability kanye nokuthola umphumela ‑ wokukhululwa. I-Ultrasonic nano-emulsation iyindlela ephumelelayo nethembekile yokufaka amakhompiyutha ezokwelapha asebenza kuwo…
Ama-pectin ayisithasiselo sokudla esisetshenziswa kakhulu, ikakhulukazi sengezwa ngemiphumela yaso ye-gelling. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwandisa isivuno kanye nekhwalithi ye-pectin ekhishwa kakhulu. I-Sonication yaziwa ngenqubo yayo yokuqinisa imiphumela, esetshenzisiwe kaningi…
Ama-rubber aqinisiwe akhombisa amandla aphezulu aphezulu, i-elongation, ukumelana ne-abrasion nokuqina okungcono kokuguga. Izihlungi ezifana ne-carbon black (isb. CNTs, MWNTs), graphene, noma silica kumele zisatshalaliswe kahle ku-matrix ukuhlinzeka ngezinto ezibonakalayo ezifiselekayo. Ama-ultrasonics anamandla…
Ultrasonic Sample Ukulungiselela for Analysis THC
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela efakazelwe yokukhiqizwa kwe-THC, kepha yona ingasetshenziselwa izinhloso zokuhlaziya. I-Ultrasonication iyindlela ejwayelekile yokulungiselela isampula esetshenziselwa ukuhlaziywa kokuqukethwe okuphelele kwe-THC kwimikhiqizo ye-cannabis.…
I-Ultrasonic Tank Agitators
Ama-Ultrasonic tank agitators angama-agitators mehendi. Ukuyaluka kwe-Ultrasonic kuxubanisa uketshezi nolunye uketshezi noma ama-solids ukwenza ngcono inqubo ye-kinetics ekwenziweni kwamakhemikhali, ukudla, okwenziwa emithi nasezimonyo. Ama-Hielscher Ultrasonics agitators ahla ngosayizi kusuka kuma-lab agitators kuya kuma-tank tank agitators…
I-Ultrasonic Wet-Precipitation of Prussian Blue Nanocubes
I-Prussian Blue noma i-iron hexacyanoferrate wuhlaka lwe-nano oluhlelekile lwensimbi (MOF), olusetshenziswa ekwenzeni ibhethri ye-sodium ‐ ion, i-biomedicine, inks kanye ne-elekthronikhi. I-Ultrasonic wet-chemical synthesis iyindlela ephumelelayo, ethembekile futhi esheshayo yokukhiqiza i-Prussian Blue nanocubes ne-Prussian…
I-Ultrafiltration (UF) isetshenziswa kaningi embonini yobisi ekuqoqweni kwe-Whey. Izinqubo ze-ultrasonically ezisizwe yi-ultrasonically zisiza ukusebenza kahle kwezinqubo zokuhlukaniswa kwe-Whey ngesikhathi sokuhlanganiswa kwezixazululo ze-Whey. I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinketho ezahlukahlukene zokuhlanganisa amandla aphezulu we-ultrasonics…
Okwahlukaniswa ngezigaba ezintathu (TPP) kuyindlela yokukhipha, ukuhlukanisa nokuhlanza izakhi, isib. Ama-lipids, ama-enzyme, ama-polysaccharides namanye ama-biomolecule, ezintweni ezibonakalayo. I-ultrasonically isize ukwahlukaniswa kwezigaba ezintathu kudlula okujwayelekile kwe-TPP ngesivuno esiphakeme, ubumsulwa obuthuthukisiwe nejubane elihlukile.…
I-Ultrasonically Promized Enzymatic Plastic Recycling
I-Polyethylene terephthalate (PET) ingumthombo omkhulu wokungcola ophuma kakhulu uvela kumanzi asetshenzisiwe namabhodlela esiphuzo. Kuze kube muva nje, ukuphinda kusetshenziswe kabusha kwe-PET kuholele kumapulasitiki asezingeni eliphansi. I-enzyme entsha yokuguqula izinto ithembisa ukonakaliswa kwe-PET ezintweni ezingavuthiwe eziphakeme,…
I-Ultra Power yaziwa kahle ngokugaya kwayo okukhulu nangokucacile nemiphumela yokusabalalisa. Ama-ultrasonicators ezimboni ahlinzeka ngokusatshalaliswa kosayizi bezinhlayiyana ku-micron- ne-nano-range. Ama-ultrasonicators wezezimboni acubungula kalula imithombo eminingi evolumu yama-viscosities aphezulu…
W.Lwesibili – Izinga eliphezulu zekhwalithi nge-Sonication
yinkampani enesipiliyoni esizinze eNingizimu Afrika, esebenza ngokukhethekile ekukhiqizweni kwemali ekhishwe phambili kanye nama-tinctures kuma-botanicals. I-W.Last isebenzisa isizinda se-ultrasonic ukukhiqiza izinto zabo ezisezingeni eliphakeme, ezisetshenziselwa injongo yokwelapha, ukunambitheka kokudla…
Ukukhiqizwa Kwezinambuzane Ezithuthukisiwe nge-Ultrasonics
Izinambuzane zingumthombo ozinzile, okhula kalula wamaprotheni asezingeni eliphakeme wokudla okunomsoco kanye nama-lipids. Ukuze uhlukanise amaprotheni nama-lipids ezinambuzaneni, isizinda se-ultrasonic sisetshenziswa njengobuchwepheshe obusebenza kahle futhi obunokwethenjelwa. I-Ultrasonication ifakazelwe ukukhishwa okuphezulu…
Iprosesa elisebenzayo le-UIP500hdT (20kHz, 500W) liyithuluzi lebanga lezimboni lokuhlola umshayeli nokusebenza kwezinga elincane lotshwala. Phakathi kwezicelo ezivame kakhulu ze-UIP500hdT ukungabinamthetho, ukusabalalisa, ukukhipha amandla, ukusakazeka kwamangqamuzana nokuphendula kwe-sonochemical. Okugcwele…
UIP1500hdT – Amandla Okucubungula Okuphezulu e-Ultrasonic
Iprosesa elisebenza nge-UIP1500hdT (20kHz, 1500W) lihlanganisa amandla aphezulu wokucubungula nokuguquguquka. Ilungele ukuthuthukiswa kwenqubo, nokwenza kahle nezinqubo zokukhiqiza. Lokhu kufaka phakathi ukufaka i-emulsifying, ukusabalalisa kanye ne-sono-chemistry, i-lysis kanye nokukhishwa noma i-homogenizing. I-UIP1500hdT ibopha igebe…
Indlela Yokuhlakaza I-Nanotubes Yomuntu Omunye Wama-Walboni Ngamunye
Ama-Carbon Nanotubes angama-single-Walled (ama-SWNTs noma ama-SWCNTs) anezici ezihlukile, kodwa ukuze aziveze kumele ahlakazeke ngawodwa. Ukuze usebenzise ngokugcwele izici eziyingqayizivele zama-nanotubes ezinodonga olulodwa, amashubhu kufanele axoshwe ngokuphelele. I-SWNTs njenge…
I-De-Aeration esebenza kahle kakhulu ye-Liquids isebenzisa i-Ultrasonics
Ngenkathi i-degassing noma i-outgassing imvamisa kuyisinyathelo senqubo esisebenzisa kakhulu isikhathi, i-ultrasonication ingasheshisa ukuhlangana kwamabhamuza wegesi nokukhuphuka kwawo kakhulu. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kungasetshenziswa kuma-batch naku-inline setups futhi kungahlanganiswa ne…
Izingxube eziphezulu ze-Shear Zezokwakha Izilwane Zokudla
Ekhiqizweni kokudla kwezilwane kudinga imishini yokuxuba ephezulu ye-shear ephezulu yokupheka ukuze kulungiswe ukuxutshwa okuxubile kwezithako ezahlukahlukene. Abaxube be-Ultrasonic bahlinzeka ngemikhosi ye-shemas ephezulu ephezulu engacubungula amaslayidi we-viscous kakhulu nezinhlama. Ngaphezu kwalokho, abahlanganisi be-ultrasonic bayasetshenziselwa ukukhiqiza ama-nano-emulsions azinzile futhi…
I-Graphene oxide i-soluble enamanzi, i-amphiphilic, ayinayo ubuthi, i-biodegradable futhi ingahlakazeka kalula kuma-colloids azinzile. Ukuxoshwa kwe-Ultrasonic kanye nokuhlakazeka kuyindlela ephumelela kakhulu, esheshayo futhi engabizi yokuhlanganisa, yokusabalalisa nokusabalalisa i-graphene oxide esikalini sezimboni. Ekujuleni komfula…
I-Ultrasonication iyithuluzi elinamandla elisetshenziswa ku-biology, chemistry chemistry kanye ne-biochemistry nasekukhiqizweni kwemithi yemithi. I-Bio-science isebenzisa ama-homogenizer e-ultrasonic ukwenza ama-lyse cell futhi akhiphe amaprotheni nezinye izinto eziwusizo, imboni ye-pharma isebenzisa ama-ultrasonics…
Amaseli we-BL21 awuhlobo lwe-E.coli olusetshenziswa kakhulu kumalabhorethri ocwaningo, i-biotechnology kanye nokukhiqizwa kwezimboni ngenxa yamandla abo okuveza amaprotheni asebenza kahle kakhulu. Ukuphazamiseka kwamaseli e-Ultrasonic, ukukhishwa kwe-lysis kanye namaprotheni kuyindlela ejwayelekile…
Production Biosynthetic of Human Milk Oligosaccharides
I-biosynthesis ye-oligosaccharides yobisi lomuntu (i-HMOs) ngokusebenzisa ukuvutshelwa noma ukusabela kwe-enzymatic inqubo eyinkimbinkimbi, edla isikhathi futhi evame ukuthambisa. I-Ultrasonication ikhulisa ukudluliswa okuyisisekelo phakathi kwamafektri amancane namaseli kuvuselela ukukhula kwamaseli kanye nokuqina kokudla. Ngaleyo ndlela, sonication iyaqina…
Khiqiza ukukhishwa kwamakhowe we-premium wekhwalithi ephezulu, isb. Kusuka ku-chaga, reishi, psilocybe cubensis (amakhowe omlingo), umhlwenga wengonyama, ama-maitake, nezinye izinhlobo eziningi zamakhowe zisebenzisa isizinda se-ultrasonic. Indlela yokukhipha emnene ye-ultrasound yamandla ingahlanganiswa ne-organised certified (i-bio-certified /…
Ama-Ultrasonicator aphezulu Wokwenza Ukudla Ukucubungula ama-Hielscher Ultrasonics 'ama-processor e-ultrasonics asebenza kakhulu, angalawuleki kahle futhi avumela imiphumela yemiphumela futhi nekhwalithi yomkhiqizo eqhubekayo. Ukukwazi ukuletha ama-amplopes aphezulu kakhulu, amaprosesa we-Hielscher ultrasonic can…
Sonochemistry is the application of ultrasound to chemical reactions and processes. The mechanism causing sonochemical effects in liquids is the phenomenon of acoustic cavitation. Hielscher ultrasonic laboratory and industrial devices are used in a wide range…
I-Ultrasonic Reactor yeBiodiesel Production
I-Hielscher inikeza ama-reactors e-ultrasoning ukuxuba ukukhiqizwa kwe-biodiesel nganoma yisiphi isilinganiso. Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonis kuthuthukisa ukudluliselwa kwesisindo kanye ne-kinetics yokusabela okuholela ekuguqulisweni okusheshayo kanye nesivuno esiphezulu. Igcina i-methanol ne-catalyst ngokweqile. I-Ultrasonic…
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kweNanomatadium (Nanoparticles)
Ama-nanomaterials abe yingxenye ebalulekile yemikhiqizo ehlukahlukene njengezinto zokusebenza eziphezulu, ama-sunscreens, ukumbozwa kokusebenza, noma izinhlanganisela zepulasitiki. I-Ultrasonic cavitation isetshenziselwa ukusabalalisa izinhlayiya zosayizi we-nano zibe uketshezi, njengamanzi, uwoyela, izinyibilikisi noma izinhlaka. Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic…
Imprint Hielscher Ultrasonics GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Oderstr. I-53 D-14513 Teltow, Germany Ucingo: +49 3328 437 3 Fax: +49 3328 437 444 email: info@hielscher.com UMqondisi Ophethe: UThomas Hielscher Commerce Registry Potsdam: HRB 19012 VAT-No. (§27a UStG): DE 814…
Le nqubomgomo yobumfihlo ihlanganiswe ukuze isebenze kangcono labo abakhathazekile nokuthi i-'Untu uqobo Lubonakala Kanjani '(PII) isetshenziswa kanjani online. I-PII, njengoba ichazwe umthetho wobumfihlo wase-US nokuphepha kwemininingwane, ingulwazi…
Ukukhishwa kukagwayi ojwayelekile kuyinqubo ethatha isikhathi, ethatha isikhathi, ebandakanya ukusetshenziswa kwezithako ezinobuthi emazingeni okushisa aphakeme, okwenza inqubo ibe yingozi. Ukukhishwa okusizakala kwe-ultrasonic okusizakala ngogwayi kungaqhutshwa kusetshenziswa amanzi noma izithambisi ezinobunzima ku…
Ultrasonic Homogenizers for Icubungula Liquid
I-Hielscher Ultrasonics ibheka ukuklanywa nokukhiqizwa kwama-homogenizer amakhulu we-ultrasonic weelebhu, ebhentshini kanye nezinga lokukhiqiza. Amandla e-Ultrasonic ayindlela ephumelelayo futhi esebenza kahle yokusebenzisa i-shear ephezulu kanye nokuxineka okukhulu koketshezi, i-powder / ketshezi…
Izihloko ezikhethekile kanye nokusesha okuvamile kwiwebsite yethu
Thola ulwazi mayelana nezinye izihloko zethu ezikhethekile nezikhathazayo noma ubheke kakhulu izicelo zokucinga ezivame kakhulu kuwebhusayithi yethu:
Ukushintshwa kwezinyawo kuyatholakala cishe kuwo wonke amadivayisi wethu we-ultrasonic. Sicela ubheke ishadi lokuhambisana ngemininingwane. Ukushintshwa kungasetjenziselwa ukulawula amadivaysi ukude ngokwenza kusebenze unyawo lwenyawo. Lokhu kugcina izandla zakho zikhululekile, isib…
As an option, our ultrasonic processors can be equipped or retrofitted with an UPcontrol package. This PC-control gives automation of the ultrasonic process parameters, such as amplitude, pulse/cycle, operating time or alternatively the actual energy input.…
Ama-Ultrasonictors angama-blenders anamandla nama-homogenizer, ukusetshenziswa kwawo kungagcini elebhu kanye nomkhakha. Kusukela eminyakeni embalwa, abasebenza nge-ultrasonicators bathole indlela ekhishini ekhombisa i-gourmet. Izindawo zokudlela ezinhle ezigadwe ngama-gourmet agqamile, amagugu amancane wokudla okuhle kunakho konke, ukupheka…
Ukulungiselelwa kwesampula ngaphambi kokuhlaziywa kungadinga izinqubo ezahlukahlukene zangaphambi kokuhlaziywa ezinjenge-homogenization yezicubu, i-lysis, ukukhishwa kwamaprotheni, i-DNA, i-RNA, i-organelles nezinye izinto ezingaphakathi kwamangqamuzana, ukuqedwa nokususwa. IVialTweeter iyidivayisi eyingqayizivele ye-ultrasonic elungiselela amashubhu amaningi wesampula…
Amadivayisi we-Ultrasonic enziwe nguHielscher asetshenziswa ngabapheki bezindawo zokudlela ezisezingeni eliphakeme zokupheka ezintsha, ezisezingeni eliphakeme. Lokhu kufaka phakathi ukukhishwa kwe-flavour, emusification noma ukuguqulwa kokuthungwa. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa izinhlelo eziningi futhi kufakazelwe ukusebenza kwawo, ukuthembeka…
I-emulsion uhlelo olunezigaba ezimbili lweziphuzo ezimbili ezingafundeki, lapho isigaba esisodwa, isigaba esibizwa ngokuthi sangaphakathi noma esihlakazekile, sisatshalaliswa njengamaconsi amancane kwesinye, isigaba esibizwa ngokuthi sangaphandle noma esiqhubekayo. Ukulungiselela i-emulsion, okokufaka okuvamile kwamandla…
Ama-mixer e-Ultrasonic ayithuluzi elinokwethenjelwa lokwenza homogenize, ukusabalalisa, nokuqinisa ukwakheka kopende ketshezi. Ama-homogenizers e-Ultrasonic akakhiqizi kuphela ama-emulsions opende azinzile, afanayo, kepha ama-ultrasonicators nawo asetshenziselwa ukugaya nokugaya imibala, ama-nanomaterials kanye nama-primary…
Umfutho we-Liquid uyithonya elibalulekile ekusebenzeni kwenqubo ye-sonication. Ngenxa yalesi sizathu, iHielscher inikeza izinzwa zokucindezelwa zangasese (i-PS7D ne-PS70) ukuze zisetshenziswe ngawo wonke amadivaysi ayo e-Ultronga. Sicela ubheke ishadi lokuhambisana ngemininingwane. In…
I-Sonochemistry iyithuluzi eliphumelela kakhulu lobunjiniyela kanye nokusebenza kwezinto zezinto ze-nano. E-metallurgy, i-irradiation ye-ultrasonic ikhuthaza ukwakheka kwezinsimbi ezi-porous. Iqembu lokucwaninga likaDkt Daria Andreeva lenze inqubo ephumelelayo futhi engabizi kakhulu ye-ultrasound…
Ukushisa kwe-Liquid yinto ebalulekile yezinqubo ze-ultrasonic. Ukuqapha izinga lokushisa, ukulawula nokurekhoda, iHielscher inikezela izinzwa zokushisa ezimbili zePT100 (PT100 nePT100-0G5) ukuze zisetshenziswe nawo wonke amadivaysi ayo e-Ultrows control. Sicela ubheke ishadi lokuhambisana…
Hielscher Ultrasonics designs custom ultrasonic reactors for special processes. The centrifugal reactor is used for ultrasonically assisted separation processes. This includes the separation of gas or solids from liquids. The liquid media enters the reactor tangentially at high speed…
Namuhla, imigoqo eyinkimbinkimbi isebenza ngamathuluzi amasha kakhulu ukudala i-Cocktails neziphuzo ezihlukile. Ephefumulelwe yi-cuisine yamangqamuzana, ama-bartenders asebenzisa ama-homogenizer e-ultrasonic ukufakwa kweziphuzo, ukuxuba ama-emulsions newayini yobudala noma imimoya. I-Hielscher's UP200Ht idume kakhulu kusukela lapho…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kufakazelwe ukuthi kusebenza kahle kakhulu ekuhlukaniselweni kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-microalgae. Ama-pigment e-Spirulina anjenge-phycocyanin aziwa njenge-superfood, anikela kwizinzuzo zezempilo ngenxa yokuqukethwe kwawo okuphezulu kwama-antioxidants,…
I-Tire Rubber Recycling nge-High-Performance Ultrasound
Imfucumfucu yokulahla udoti iyinto enobuthi, engakheliseki kalula eyenza ukulahlwa kwayo kube yinkinga yezemvelo nangokomnotho. I-Ultrasonic devulcanization kuyindlela esheshayo nephumelelayo yokuvuselela imfucumfucu yokulahla udoti ukuvumela ukuphinda usebenzise amathayi odoti. Ukulungiswa kabusha kwerabha ye-Ultrasonic…
I-mustard condiment ikhiqizwa kusuka kufulawa yesinaphi namanzi noma uviniga. Ukuphathwa kwe-Ultrasonic yemastadi kuyindlela esheshayo nephumelelayo yokukhipha i-flavour spectrum ephelele embewu yembewu yesinaphi. Kwinqubo engagundile ye-shear engasebenzi kahle, enamandla…
I-Ultrasonic Nanostructuring yama-Antibiotic
Ukukhiqizwa kwama-antibiotic okusizwa nge-Ultrasonically kungakhuphula ukusebenza kwawo, eben ngokumelene namagciwane amelana nemithi: Inani elandayo lamagciwane amelana nemithi elwa namagciwane kuyinkinga engakaxazululwa yokwenza ukutheleleka kwamagciwane, okuphathwe ngempumelelo ngama-antibiotic emashumini eminyaka edlule, a…
C. elegans, isibungu se-nematode, siyisidalwa semodeli esisetshenziswa kabanzi ku-biology. Ukulungiselela isampula ngaphambi kokuhlaziywa kudinga i-lysis, amaprotheni kanye ne-lipid isizinda kanye nokuhlukaniswa kwe-RNA, okungenziwa ngokuthembekile nge-sonication. Iziphazamisi zeseli ze-Ultrasonic ziyi…
I-Ultrasonication inqubo yokuqinisa inqubo, efakwa ezinqubweni ezahlukahlukene kuma-biorefineries. Izinqubo ezijwayelekile ezizuzisa kakhulu ekwelashweni kwe-ultrasonic ukukhishwa, ukusabela okuncane okungafani nezinye izinhlelo ezibandakanya ukuxubana okukhulu, i-homogeniaztion nokusabalalisa.…
Ukuhlukanisa i-psilocybin kusuka kwisikhunta esisha nesomisiwe sezinhlobo ze-psilocybe kwaziwa njengokudla isikhathi futhi kaningi kungasebenzi kahle. Nge-ultrasonic isizinda i-psilocybin, i-psilocin, i-baeocystin ne-norbaeocystin ikhishwa ngokushesha kusuka kumakhowe amasha we-psilocibe amasha. Isizinda se-Ultrasonic…
Izilingo ezifana ne-ELISA zisetshenziselwa kabanzi ukuxilongwa kwe-in vitro, ukutholwa kwamaprotheni ahlobene nezifo nokulawulwa kwekhwalithi (isb. Ukulungiswa kwesampula ye-Ultrasonic kuyindlela esheshayo, ethembekile futhi ekhiqizwayo yokwenza iseli nokuhlukanisa amaprotheni angaphakathi, i-DNA, i-RNA…
I-Ultrasonics Yenza i-Lithium-Ion Battery Recycling isebenze kangcono
I-Hielscher VialTweeter iyunithi eyingqayizivele yokulungiselela amasampula amaningi we-ultrasonic, esetshenziselwa ukungasebenzi i-coronavirus SARS-COV-2. I-VialTweeter ivumela ukulungiselela izigaxa zesampula ezifika ku-10 ngasikhathi sinye futhi ngaleyo ndlela iyunithi ekahle yokucubungula amasampula amaningi.…
Isizinda se-Ultrasonic Elderberry
Ukukhishwa kwe-Elderberry kuyaziwa ngezindawo zazo zokulwa namagciwane futhi ngaleyo ndlela kusetshenziswa kakhulu njengekhambi lemvelo lokunciphisa izimpawu zomkhuhlane ezifana nomkhuhlane, ukukhwehlela, nomphimbo obuhlungu. Ukukhiqiza ukukhishwa kwe-elderberry nge-polyphenol ephezulu nokuqukethwe kwe-antioxidant, kumnene…
Amahlumela ukudla okudumile kwezempilo okunothe amavithamini, amaprotheni, amaminerali kanye nama-antioxidants. Inqubo yokuhluma inzima futhi idla isikhathi. Ukusebenza kwe-Ultrasonic kwembewu kukhulisa izinga lokuhluma, kusheshisa inqubo yokuhluma, kuthuthukisa iphrofayili yokudla, futhi kukhuthaze…
Imvelo, izithako ze-organic (i-INCIs) ehlanganiswe nokusebenza okuphezulu kanye ne-bioavailability yizici zemikhiqizo emisha yokuhlanza ehlanzekile. I-Ultrasonication isetshenziswa njengecebo elisebenzayo futhi elinokwethenjelwa lokuxuba, ukuxuba, ukusabalalisa, i-nano-emulsify ne-nano-encapsrate izithako zokuhlobisa. Kungani Kufanele…
Abahlanganisi abakhulu be-shear ephezulu basebenzisa amabutho aphezulu e-shear kwiziphuzo nakuma-slur ukuze banikeze ukuhlukaniswa okufanayo, ukuxubana, nokushumeka kwezigaba ezimbili noma ngaphezulu eziqinile noma ezigcwele uketshezi. I-Ultrasonication yakha amabutho aphezulu e-shear nge-acoustic cavitation, eyenzeka…
Izihlanganisi ze-Ultrasonic zisetshenziselwa kabanzi ukumanzisa, ukuhlakaza noma ukuhlakaza izinhlayiya nezinhlayiya zibe iziphuzo. Ama-ultrasonicators asebenza ngokuphezulu enza amabutho amakhulu e-shear, aphuka futhi aqhekeze, ama-agglomerates nezinhlayiya eziyinhloko usayizi omncane we-microscopic noma we-nano. Ukuhlanganiswa kwezinhlayiyana…
Ukukhiqiza izihlanzana zesandla nezisombululo zokuqeda amagciwane, kudingeka ubuchwepheshe obunamandla bokuxuba ukuze kutholakale inhlanganisela engaguquki. Abahlanganisi be-Ultrasonic kanye nama-agitators yiteknoloji yokuxuba ethembeke kakhulu futhi ephumelelayo yokuhlanganisa nokufaka izigaba ezimbili noma ngaphezulu…
I-Mycoprotein amaprotheni akhiqizwe ukhunta akhiqizwa ukusetshenziswa ngabantu, okusetshenziselwa kakhulu ukulungisa inyama noma "inyama yenkohliso". Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kanye ne-homogenization kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhipha i-mycoprotein ku-fungus efinyelela ezithela ngamaprotheni aphezulu kakhulu…
Imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba efana ne-cremes, i-lotion, ama-moisturizer, ama-balms kanye namafutha okugcoba ngokuvamile asuselwa ku-submicron- enhle nase-nano-sized emulsions. I-Ultrasonic emulsation idala amabutho aphezulu-abamba futhi isungulwe kahle njengendlela enamandla yokuhlanganisa yesikhumba enokwethenjelwa…
Ukwenziwa kwe-Ultrasonic kweNanostructured Lipid Drug Carriers
Ama-Nanostructure lipid carriers (NLCs) ayindlela esezingeni eliphakeme yezinhlelo zokulethwa kwezidakamizwa ezinobukhulu be-nano ezinomgogodla we-lipid negobolondo elinamanzi. Ama-NLC anokuqina okuphezulu, avikela ama-molecule e-bio asebenzayo ekulimaleni futhi anikeze ukukhululwa kwezidakamizwa okuqhubekayo. Ultrasonication kuyinto…
Ukukhiqizwa kweLipstick kufaka ukugaya nokuxubha kwama-waxes kanye nemibala yemibala ezingeni eliqondakala kahle ukuze kuqinisekiswe iphrofayili ethile yokuthungwa kwemibala. Ukugaya nokuxubha kwe-Ultrasonic kungokwethenjwa, kusebenza kahle, futhi kungashintshana ngokuqondile…
I-Famotidine yi-molecule ejwayelekile yezokwelapha esetshenziswa emithini yesishisa. Ukuze unqobe i-solubility empofu kanye ne-bioavailability ebumpofu, i-Famotidine ingakhiwa ibe yi-nanoparticles eqinile-i-lipid isebenzisa i-sonication njenge ndlela yokufunda. I-Ultrasonically Famotidine-Loaded Solid Lipid Nanoparticles…
I-Allicin iyindawo esebenza kahle, engakhishwa kuma-clove egalikhi amasha. I-Allicin ithambekele ekuwohlokeni ngakho-ke kufanele yenziwe ifomu lokwengezelelwa okuzinzile ukuze ithole ifomula elinamandla lesikhathi eside. Ukubethelwa kwe-Ultrasonic kwe…
I-Garlic (Allium sativum) inothile ngama-organosulfur compounds (isib. Allicin, glutathione), ezikhuthaza izinzuzo eziningi zezempilo. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ethembekile futhi ephumelelayo yokukhiqiza okukhishwe kakhulu kwegalikhi. I-Ultrasonication iphumela ezithelweni eziphakeme zekhwalithi ephezulu, egcwele…
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kweLiposomal Omega-3 Fatty Acids
AmaNanoliposomes yizithwali zezidakamizwa ezisebenza kahle ezisetshenziselwa ukuthuthukisa i-bioavailability yezakhi ze-bioactive ezinjenge-omega-2 fatty acids, amavithamini nezinye izinto. Ukubethelwa kwe-Ultrasonic kwezakhi ezixubile kuyindlela esheshayo nelula yokulungiselela ama-nanoliposomes aphezulu…
Isizinda se-Ultrasonic Shukela kusuka ku-Sugar Beet cossette
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuthuthukisa umkhiqizo we-sucrose ekhishwe kushukela we-beet cossette futhi kunciphise ubude besikhathi senqubo yokususa. I-Sonication iyindlela elula nephephile, engahlanganiswa kalula nobuchwepheshe besimanje bokukhishwa kwe-flow-yamanje flow in…
I-Remdesivir (GS-5734) umuthi olwa negciwane, ophansi kocwaningo lokwelapha isifo se-Ebola virus and COVID-19, obangelwa yi-Sars-CoV-2 coronavirus. I-Remdesivir yikhambi lezemithi, elilawulwa ngaphakathi. Ngenkathi ukuqeda okufushane kwe-ultrasonic kukodwa kukhulisa…
Ukwenziwa kwe-Ultrasonic kwamaNiosomes
AmaNiosomes ama-vesicles asesilinganisweni, angasetshenziswa njengezithwali zezidakamizwa (isb. Izidakamizwa zomdlavuza) nezinye izinto ze-bioactive. I-Ultrasonic emulsation yindlela elula futhi esheshayo yokwenza ama-niosomes amancane ngomthwalo ophakeme wezidakamizwa. Ukulungiselela kweNiosome A…
I-Nano-silver isetshenziselwa izakhiwo zayo ezilwa namagciwane ukuze iqinise izinto zokwelapha kwezesayensi yezokwelapha kanye nezinto ezibonakalayo. I-Ultrasonication ivumela ukwakheka okusheshayo, okusebenzayo, okuphephile futhi okuphathelene nemvelo kwe-nanoparticles eyindilinga emanzini. I-Ultrasonic nanoparticle synthesis ingalinganiswa kalula ukusuka…
I-Nano-Encasised Intranasal Vaccine Against I-Pneumoniae ene-Ultrasonics
Izithwali zezidakamizwa ezenzelwe iNanoparticle zingubuchwepheshe obuguqukayo, obuvumela ukwakheka kwezinhlelo zokulethwa komjovo ngesilinganiso esiphakeme sokuvikela ezifweni ezahlukahlukene. I-Ultrasonic emulsation kanye ne-encapsulation kuyindlela ephumelela kakhulu yokulungiselela ukuthwala izidakamizwa ze-nano…
I-Catechin efana ne-epigallocatechin gallate (EGCG), i-epigallocatechin (EGC), i-epicatechin gallate (ECG), ne-epratechin (EC) ngama-polyphenols, abonisa izinzuzo ezinkulu zezempilo. Ngenkathi i-catechin itholakala ngamanani amancane etiyeni eliluhlaza, cocoa, izithelo nakokunye ukudla, okuphezulu…
I-Ultrasonic Synthesis ye-Pharma-grade Chloroquine
IChloroquine ibukeka njengesidakamizwa esithembisayo ekulweni nobhubhane lwe-COVID-19. Ngenkathi i-chloroquine iyisidakamizwa esidumile, eshibhile, ukulethwa kumele kuklanywe kakhulu ukuze kufezekiswe isidingo samanje. I-Ultrasonic synthesis ilula, iphephile…
Izithwali zezidakamizwa ezinobukhulu obukhulu be-Nano zisetshenziselwa kabanzi ukuletha amakhompiyutha asebenzayo emithini kumaseli ahlosiwe. Ukuze ubethele izinto ezisebenzayo kwisithwali somuthi esine-bioavailability ephezulu, kusetshenziswa ama-nanoparticles aqinile we-lipid. I-Ultrasonic nano-emulsization nokubethelwa…
I-Ultrasonic lysis kanye nokukhishwa kuyindlela ethembekile futhi yesikhathi eside esungulwe yokuphazamiseka kwamaseli nokukhululwa okulandelayo kwamagciwane, amaprotheni egciwane, iDNA, ne-RNA. I-Ultrasonics ekucwaningweni kweCoronavirus Ukukhishwa kwamagciwane kusuka kwizicubu zezitho…
Sula i-Nano-Emulsions nge-Stuph ne-Ultrasonics
Ama-nano-emulsions acacile anezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezicelo ekudleni, isiphuzo nakwindlela yokwenza izimonyo. Ukuhlinzekwa kwe-Stuph Corp kuyinto ehlukahlukene yokudla ebangeni, ama-emulsifera asezingeni eliphakeme kakhulu ukulungiselela ama-nano-emulsions acacile wokusetshenziswa ekudleni, iziphuzo, ama-tinctures, ukugxila kanye…
Ama-hops nama-hop extracts ayizithako ezibalulekile ekukhiqizeni ubhiya. Ama-alpha-acids a-caryophyllene (humulone) kanye ne-beta-caryophyllene (humulene) ayizinhlanganisela ezibalulekile zokunambitheka, ezinikeza ubhiya umunyu wazo futhi zibe neqhaza ephuzwini lawo, ekwakheni amagwebu nasekuzinzeni kwama-microbiological. Ultrasonic…
Amakhathalogi weFischer-Tropsch athuthukisiwe nge-Sonication
I-Synthesis eyenziwe ngcono kwe-Fischer-Tropsch Catalysts ene-Ultrasound: Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kwezinhlayiya ezinamandla kusetshenziselwa izinhloso eziningi. I-Ultrasonic synthesis isiza ukudala izinhlayiya ze-nano-modified noma ezisebenzayo, ezinomsebenzi omkhulu wokuqinisa. Ama-catalysts asetshenzisiwe futhi anobuthi angaba lula…
Imiphumela ye-Ultrasonic ku-Precipitation ne-Froth Flotation
Amanzi emfucumfucu yezimboni avame ukugcotshwa kakhulu ngenxa yokusetshenziswa ngokweqile kwe-sulfuric acid. Amanzi amdaka ahlanganisiwe aqukethe izinsimbi ezisindayo zivame ukuphathwa ngokuqothuka kwamakhemikhali ngemuva kokubumbana nokuntanta. Ukulungiswa kwe-Ultrasonic ngaphambi kokufafaza kuholele ekuphawuleni…
Ukudayiswa kwe-ultrasonically kusizwe ukufakelwa kwezindwangu kungenisa ukungena kwamabala emaphepheni e-fiber futhi kukhuphule namandla wombala nokuqina kwemibala ngokukhulu. Ukudaya i-Ultrasonic kuyinqubo esheshayo, engaqhutshwa ngaphansi kwezimo ezinobumnene futhi…
I-Perovskite Synthesis yi-Ultrasonication
Izimpendulo ezenziwa nge-ultrasonic eziyisisekelo futhi eziqinisiwe zinikeza indlela yokuqamba eyenziwe kahle, eguquguqukayo kanye nokuguquguqukayo enhlobonhlobo yokwenza izinto ezenziwe nge-light-activated, ezivame ukungalungiswa ngamasu ezejwayelekile. I-crystallization ye-ultrasonic kanye kwezulu zamakristalu e-perovskite kusebenza kakhulu…
I-Ultrasonic aromatisation nokunambitheka kwamafutha adliwayo kususelwa esikhungweni sokudonsa i-flavour complements kusuka kuma-botanicals afana namakhambi, izinongo, izithelo njll Sonication inqubo yokuqinisa, ekhipha izingxenye ze-bioactive emafutheni. Njenge…
Ukuguguleka kwe-cavitation kwenzeka ezindaweni ezibonakalayo ezivezwa ku-cavitation enkulu ye-ultrasonic. Ukuhlolwa kokuguguleka kwe-cavitation kuyindlela esheshayo yokukala ukumelana kokuguguleka kwezinto noma ukumbozwa kwengcindezi enkulu nezinye izinto zokuguguleka komhlaba. Inikeza okulula…
Amafutha asolwandle athinteka yimithetho emisha, edinga okuqukethwe kwesibabule okuyi-0.5% m / m noma ngaphansi. I-Ultrasound-assisted oxidative desulfurization () yindlela esunguliwe esheshisa ukusabela kwe-oxidation futhi inqubo eyondayo nephephile. Izinqubo ze-UAOD…
Ultrasonic Phosphor Ukubuyiselwa kusuka Sewage Sludge
Isidingo somhlaba wonke se-phosphor siyakhula, ngenkathi ukulethwa kwemithombo yemithombo ye-phosphorous kusilela. I-sewage sludge kanye ne-sewage sludge ash zicebile ku-phosphorus ngakho-ke zingasetshenziswa njengomthombo wokubuyisa ifosforasi. I-ultrasonic…
Ukuvuselela kabusha i-asphalt kanye nama-rejuvenators kunika amandla ukuphinda kuvuselelwe amapayipi asphalt akhona ngokusebenzisa ama-ejenti wokuvuselela izinto zokwakha. Izihlanza ze-Ultrasonic ziyindlela enamandla yokuxuba izinhlayiya ze-nano-amaconsi nano-amaconsi ku-asphalt kanye ne-bitumen emulsions. I-ultrasound yamandla isetshenziselwa…
I-polinyydroxylated C60 fullerene enganyibilikisi wamanzi, ebizwa ngokuthi i-fullerenol noma i-fullerol, is a scatulager yamahhala engaqinile futhi ngenxa yalokho isetshenziswa njenge-antioxidant kokuphakelayo nemithi yemithi. I-hydroxylation ye-Ultrasonic iyindlela esheshayo futhi elula yokusabela kwesinyathelo esisodwa, esetshenziselwa ukukhiqiza…
I-Ultrasonic Hemp Fiber Processing
Ukubuyiswa kwe-Ultrasonic kwezinto zokufakelwa ezinjenge-hemp kanye nefilakisi yefilakisi kuvumela ukuguqulwa kabusha okusheshayo nokunempilo kwe-fiber. Ultrasonically kusetshenzwe imicu ye-bast ifakiwe futhi ikhombisa indawo ephakeme kakhulu, amandla akhulayo nokuguquguquka. Ultrasonic fiber…
Ukwelashwa kwe-ultrasonic yembewu kuyindlela ewusizo yokuhlwanyela kwangaphambili yokuvuselela ukuhluma. I-Sonication iyindlela ephumelelayo yokwephula ukungasebenzi kahle kwembewu kanye nokwenza ngcono izici zokuhluma. Imishini ye-Hielscher ultrasonic ingalawulwa ngokuqondile ukuze uthole umphumela onokwethenjelwa wembewu…
I-Ellagitannins iyisendlalelo se-urolithin A esezingeni yobudala, eguqulwa i-ellagitannins yi-gut microbiome. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuthuthukisa ukukhishwa kwe-ellagitannins kusuka kumaseli ezithelo nezitshalo ukuze kukhiqizwe izithasiselo kanye nemithi ngamakhemikhali…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic ka-Quillaja Saponins
Ukukhishwa kweSaponin kwesihlahla seQuillaja saponaria Molina kungumthombo oyinhloko wama-saponin kwizicelo zezimboni. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Quillaja saponins ezithela phezulu kwama-saponins. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhiqiza okuphezulu kwe…
ICapsaicin iyi-flavour esemqoka ne-spice complication kupelepele oshisayo, owaziwa nangokuthi yi-chilies. Ukuze kukhiqizwe ikhwalithi ephezulu ye-capsaicin njenge-flavour enamakha futhi isithako sokwelapha, inqubo efanelekile kodwa eyisusa yokukhishwa iyadingeka ukuvimbela ukonakaliswa. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic…
I-Astaxanthin iyi-antioxidant enamandla amakhulu esetshenziswa emithini yezokwelapha kanye nezithasiselo zokudla okunempilo. Ukuze ukhiqize i-astaxanthin esezingeni eliphakeme kusuka emithonjeni yemvelo efana ne-algae, inqubo yokukhipha ukusebenza ephezulu iyadingeka. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela yokwelapha eyenziwe ngomshini, enikeza ephezulu…
Ukukhishwa kwe-Vanilla yisisombululo se-flavour ekhishwe emigodini ye-vanilla kusisombululo se-ethanol namanzi. Ukukhiqiza i-vanillin esezingeni eliphakeme njengephunga, ukunambitheka kanye nephunga lezinto ezinamakha, kuyindlela ephumelelayo yokukhipha isithako esebenza kahle kodwa emnene ukuvikela ukubola. I-Ultrasonic…
IQuercetin iyisizinda sezitshalo seqembu lama-polyphenols, aziwa ngokufiphaza okunempilo. Ukukhiqiza i-quercetin esezingeni eliphakeme yezithasiselo zokudla kanye nezithasiselo, inqubo ephumelelayo, kodwa nokho emnene yokususa iyadingeka ukuvimba ukubola. Isizinda se-Ultrasonic…
Ukukhishwa kwezakhi ezixubile njenge-THC ne-CBD kusuka ku-cannabis kungenziwa ngamasu ahlukile. Imishini yokukhishwa kwe-Ultrasonic inezinzuzo eziningi ezenza kube yindlela ephezulu yokukhishwa. Ngenxa yezithelo zayo eziphakeme, ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu, ngokushesha…
I-Ultrasonic Nano-Emulsification ye-Microencapsulation ngaphambi kokufiphaza-Ukumisa
Ukuze kusebenze izithako ezisebenzayo ngokusula kokufafaza, kufanele kulungiselelwe i-micro-noma nanoemulsion eyisisekelo esihle. I-Ultrasonic emulsation iyindlela eqondile nethembekile yokukhiqiza i-micro- ne-nano-emulsions Njenge-survivant ehlukile, i-biopolymers i-gum arabi enjalo noma…
Isizinda se-Ultrasonic se-Polysaccharides kusuka ku-Astragalus Membranaceus Umsuka
Izimpande ze-Astragalus membranceus (ezibizwa nangokuthi i-Astragalus propinquus) ziqukethe i-saponin cycloastragenol, engahle isebenze i-telomerase futhi ngaleyo ndlela yandise ubude bama-telomeres. Ubude beTelomere buhlotshaniswa nokuphila isikhathi eside. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme yokuhlukanisa i-cycloastragenol…
Ama-Bitter amakhabe (owaziwa nangokuthi i-apula elibabayo, ushukela obabayo, isikwashi esibabayo, ibhalsamu-isithelo) isithelo esiphakeme emakhompiyukini azuzisa impilo anjenge-antioxidants, ama-flavonoid, ama-phytosterols nama-saponins. I-Sonication yaziwa kakhulu ukuqinisa ukukhishwa kwezinto ezi-bioactive kusuka kuma-botanicals.…
Ultrasonic Kratom Extraction
I-Ultrasonication isebenza kakhulu ukukhiqiza izithombisi ezicebile nge-alkaloid kusuka emaqabungeni e-kratom (Mitragyna speciosa). I-Sonication ikhipha amakhompiyutha we-bioactive anjenge-mitragynine ne-7-hydroxymitragynine kusuka kumaseli wesitshalo ukuze ahlukaniswe. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kunikela ngezithelo eziphakeme ku…
I-Ultrasonic Cold-Water Extraction ye-Mogrosides kusuka ku-Monk Fruit
Izithelo zeMonki (S. grosvenorii) zikhipha futhi ikakhulukazi i-mogroside yayo eyi-V isetshenziswa njenge-sweetener engokwemvelo engeyona i-caloric. I-Mogrosides. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela elula, esheshayo, yokuzala futhi enokwethenjelwa esetshenziswe ngempumelelo ukukhiqiza i-non-caloric sweetener evela emoneleni…
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic akhelwe kumazinga aphezulu embonini. Uma kwenzeka ubhekana nanoma iyiphi inkinga noma isici, sicela usazise! Ithimba lethu lokusekelwa lizokujabulela ukukusiza ekutholeni i-unit yakho ye-ultrasonic ukuthi isebenze futhi, ngokushesha. Yenza…
Ultrasonic Solutions for Improved Vaccine Production
I-Sonication isetshenziswa kwizinyathelo ezahlukahlukene zokulungiswa kwemijovo: ukuthola i-cell lysis, ukwenza i-homogenize ukumiswa kwamaseli, ukukhuthaza ukukhula kweseli, ukuthola i-encapsulation, amaprotheni okubopha amaprotheni njll. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher asetshenziswa ekukhiqizeni i-antigen, encapsulation kanye nokwakhiwa njenge…
Amakhowe okwelapha ayaziwa kusukela ezikhathini zasendulo ngezinzuzo zawo zezempilo ezihlukile. Muva nje, isikhunta sezokwelapha siguqukela ekuthengisweni okujwayelekile ukuthuthukisa impilo kanye nokuqinisa amandla. Ukuze uhlangabezane nesibonakaliso esiphelele semiphumela esekelayo yezempilo ye…
I-Ultrasonic Resveratrol Inclusion Complex
I-Resveratrol iyi-polyphenol, ethembisa izinzuzo eziningi zezempilo, isib. Ukwelula isikhathi sokuphila, kanye nokwelapha isifo senhliziyo, isifo sikashukela, umdlavuza, i-Alzheimer's kanye nezinye izimo ezingamahlalakhona. Kodwa-ke, i-resveratrol ine-bioavailability ephansi futhi ikhombisa ukushesha okusuka ku…
Kungani Nanoformed Medicines?
Ama-nanoemulsions we-Ultrasonic adlula njengomthwali wezidakamizwa ngenxa yomthamo ophakeme kakhulu we-solubilization kunezixazululo ezilula ze-micelle. Ukuqina kwabo kwe-thermodynamic kunikeza izinzuzo ezinhlelweni ezingazinzile njenge-emulsions enobukhulu obukhulu, ukusatshalaliswa kanye nokumiswa. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher asetshenziselwa ukulungisa ama-nanoemulsions…
Ama-Hielscher ama-ultrasonic akhipha kuyindlela yesimo sobuchwepheshe uma kukhulunywa ngokukhishwa okuthembekile nangokufanele kwamafutha we-hemp ne-CBD. I-Ultrasonication yaziwa kakhulu njengendlela enamandla kakhulu yokukhipha isithako ukukhipha amakhompiyutha abalulekile kuma-botanicals. Ngokuqhathanisa ne-…
I-Ultrasonics ye-Recycling of Battery Lithium Ion
Amabhethri e-Lithium-ion asetshenziswa ezimotweni zikagesi manje nje eza emakethe enkulu futhi ngawo, amandla okuphinda asebenze kabusha kufanele athuthukiswe. I-Ultrasonic leaching iyindlela esebenza kahle, enobungani bemvelo yokuthola izinsimbi ezinjengeLi, Mg, Co, Ni njll.…
Ukukhishwa kwe-ultrasonic kwe-Piperine kusuka ku-Pepper
I-Piperine iyinto enempilo etholakala kuma-peppercorns futhi ibhekelwa izakhiwo zayo zamakhemikhali. I-Ultrasonic iyindlela ephumelelayo, elula, futhi esheshayo yokususa yokuhlukanisa i-piperine ephezulu. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ethembekile futhi efakazelwe, esivele ibanzi…
Ultrasonic Isikhunta Curcumin Superparticles
Njengoba i-turmeric iqukethe kuphela ama-2-9 wt% ama-curcuminoids, isizinda esisebenzayo noma inqubo yokuqamba iyadingeka ukuthola i-poda enamandla. Ultrasonically wasiza i-antisolvent precipation kuyindlela ephumelela kakhulu yokwakha izinhlayiya ze-curcumin. I-ultrasonic antisolvent kwezulu…
Ama-Bitter ahlanganiswa kakhulu utshwala obusetshenziselwa ukunambitha ama-cocktails nezinye iziphuzo ezidakayo. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kanye nokungeniswa kusiza ukudala iphrofayili yokunambitheka okukhulu kuma-bitters. Ngenkathi ukumukelwa kwendabuko kwama-bitters kuyinqubo ethatha isikhathi, i-ultrasonic…
Umsebenzi wethu wezenhlalakahle
I-Hielscher Ultrasonics nomndeni wakwaHielscher bazibophezele ngokuqinile ekuzibophezeleni kwezenhlalo ngebhizinisi nempilo yomuntu siqu. Kithina, umthwalo ophathelene nokuhlalisana kwabantu (CSR) usho ukuqhuba ibhizinisi ngokufanelekile nangokuzwela izinselelo zenhlalo, amasiko, ezomnotho nezemvelo. Njengengxenye ye…
Amakhambi, izinongo nezinye izinto zokutshala kucebile ngama-phytochemicals, okuyizinto ezibalulekile emikhiqizweni yokwelapha neyondlayo. I-Sonication yephula isakhiwo seseli futhi ikhulule amakhompiyutha we-bioactive - okuholela ekuvuneni okuphezulu kanye namanani wokukhishwa okusheshayo. Njengoba…
Umoya ogezwe ngamafutha yisiphuzo esotshwala esifakwa ngamafutha noma ngamafutha. Amagagasi anamandla e-ultrasound akhiqiza i-emulsions enhle kakhulu futhi andise ngaleyo ndlela ukudluliselwa kwesisindo phakathi kwezigaba ezimbili. Ngokugeza kwamafutha e-ultrasonic, umoya ungene ngaphakathi…
I-Psilocybin yinto esebenzayo ekhishwe kumakhowe we-hallucinogenic. Isizinda se-Ultrasonic sivame ukusetshenziselwa ukukhipha i-psilocybin kahle kusuka kumakhowe. Isizinda se-Ultrasonic sinikeza isivuno esikhulu se-psilocybin ngesikhathi sokukhipha esisheshayo. Ukuhlukaniswa kwe-Ultrasonic kwe-Psilocybin Isizinda se-Ultrasonic…
I-ultrasonic tenderizing yenyama iyindlela elula futhi elula yokwenza. I-tenderization ye-ultrasonic isebenza ngempumelelo emakhishini nasemigqeni yokucubungula ezimbonini. I-Hielscher Ultrasonics inikeza okukhethwa kukho okubili: i-compact sonicators ye-tenderization elula futhi elula ezindaweni zokudlela. high-power ultrasonic…
Ukuhamba kwe-Ultrasonic kuthuthukisa ukunambitheka kwama-e-liquids / e-juices kakhulu. Ukwelashwa okunyakazayo kwe-ultrasonic kunikeza izinzuzo ezimbili ezinkulu: Okokuqala, ukushibilika kwe-ultrasonic kunikeza iphrofayili yokunambitheka ehlukile, ebonakala ngokunambitheka okugcwele, okujikelezayo nokubushelelezi. Okwesibili, nge…
Ubungako bezinhlayiyana ezingalingani kanye nosayizi wezinhlayiyana ezingekho emthethweni zibangela ukulimala okukhulu komhlaba ophucuziwe phakathi kwenqubo ye-CMP. Ukusakazwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme yokusabalalisa nezinhlayiya zokupholisha ze-nano-deagglomerate. Ukusakazwa komfaniswano okutholwe imiphumela ye-sonication…
Izixazululo ze-ultrasonic Extraction kusuka ezimbandeni
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kufaka izinzuzo eziningi njengokukhiqizwa okuphezulu, amanani okushesha okukhishwa, ubungani bemvelo nokusebenzisa amandla okuphansi. Enye yezinzuzo eziqine kakhulu ukusetshenziswa kwamanzi njengesizinda sokukhipha. Kodwa-ke, i-sonication ingasetshenziswa ngezinhlelo eziningi ze-solvent…
Ngesikhathi sokugunda kwe-DNA ne-RNA, ama-molecule e-DNA aqhekeka abe yizicucu ezincane. Ukuqhekeka kwe-DNA / RNA kungenye yezinyathelo zesampula ezibalulekile ezidingekayo ukudala imitapo yolwazi ngokulandelana kwesizukulwane esilandelayo (NGS). Ukucheba kwe-Ultrasonic DNA isebenzisa amandla we…
Ama-bacteria we-E. coli angamabhaktheriya asetshenziswa kakhulu ku-micobiology kanye ne-biotechnology. Abaphazamisi beseli ye-Ultrasonic baletha imiphumela enokwethenjelwa futhi engavuselelwa yokuhlolwa kwe-E. coli. Amandla okubamba angalawuleki futhi anemba ngokuthe ngqo kanye namandla e-shear kuholela ekuphazamisweni okuphelele…
Imikhiqizo yamaqanda ewuketshezi (amaqanda aphelele, amaqanda amhlophe, izikhupha) kufanele ifakwe namanzi ukuqinisekisa ukuphepha kokudla. Ama-homogenizers e-Ultrasonic aletha amandla amakhulu e-cavitation namandla aphezulu okubulala amagciwane. Ikakhulukazi uma kuhlangene namazinga okushisa aphakeme (∼50 ° C) kanye nengcindezi (mano-thermosonication), amandla e-ultrasound…
Lapho i-wax ihlakazeka njengamaconsi e-nano ngokusabalalisa okungenamsoco kakhulu, kutholakala i-wax emulsions ezinzile. Ama-homogenizer e-Ultrasonic akhiqiza amabutho aphezulu e-shear futhi anokwethenjwa futhi anamandla amasistimu ukukhiqiza uzinzo we-wax nano-emulsions ozinzile. Hielscher Ultrasonics 'high-shear ultrasonicators…
I-ultrasound yamandla ezinsimbi ezincibilikisiwe kanye nama-alloys akhombisa imiphumela ehlukahlukene enenzuzo efana nokuhlelwa, ukwedlula, nokuhlunga okuthuthukile. I-Ultrasonic inyusa ukuqina okunga-dendritic kuzinsimbi eziwuketshezi kanye nensimbi eqinile. I-Sonication inezinzuzo ezibalulekile ekucocweni okungafani nokwakhiwa kokusanhlamvu okukhishwa…
Ultrasonic Homogenization ye-Soy Milk
Izinselelo zokukhiqizwa kobisi lwe-soy zilele ekukhiqizeni isiphuzo esimnandi, esisezingeni eliphakeme se-soy ngaphansi kwezimo zokusebenza kwenqubo ephezulu. I-homogenization ye-Ultrasonic kanye ne-pasteurization inikeza izinzuzo zobisi lwe-soy enempilo enamanani aphezulu wokudla &…
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kusetshenziselwa ukukhiqiza ama-nanofuel noma i-diehor, inhlanganisela yamafutha ethanol nodizili, othuthukiswa ngokufakwa kwe-CNTs noma i-nanoparticles. I-ultrasonics yamandla ikhiqiza i-super-emihle, i-nano-pet emulsions kanye nokuhlakazeka. Ama-nanoparticles ahlakazeka ngokwe-Ulopasonic kugesi…
Ukulungiselela i-Ultrasonic ye-Platelet i-Serum ecebile
I-plasma-rich plasma (PRP) yi-plasma yegazi eye yathuthukiswa ngamaplatelets, asetshenziselwa ukwelashwa kanye ne-estethic. Ukuhlolwa nokulungiswa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephumelela kakhulu yokulungiselela i-plasma eningi. I-Hielscher Ultrasonics inikeza izinhlelo ezahlukahlukene ze-ultrasonics…
Ukuxubana kwe-Ultrasonic nokuhlakazeka kusebenze futhi kuqinisa ukusabela okubuthakathaka kuma-reactor wombhede ohleliwe. I-sonication ithuthukisa ukudluliselwa kwesisindo futhi ikhuphula ukusebenza kahle, isilinganiso sokuguqulwa nesivuno. Inzuzo eyengeziwe ukususwa kwezendlalelo ezixolisayo ezivela…
I-Ultrasonic Stem Cell Isolation
I-cavitation ye-Ultrasonic iyindlela ephumelelayo kakhulu yokuhlukanisa amangqamuzana amancane avela kumuntu we-adipose. I-Ultrasonically isolated stromal vascular fraction (SVF) ikhombisa amandla amakhulu okuvuselela izicelo zezokwelapha. I-Hielscher Ultrasonics inikeza okukhethwa kukho okuhlukahlukene okuqondile nangokungaqondile…
I-Ultrasonically Yakhawuleza I-Gypsum Crystallization
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic nokusabalalisa kusheshisa i-crystallization kanye nokubekwa kokuphendula kwe-gypsum (CaSO4 ･ 2H2O). Ukusetshenziswa kwamandla e-ultrasonics ku-gypsum slurry kusheshisa i-crystallization ngaleyo ndlela kunciphisa isikhathi sokusethwa. Ngaphandle kwesilungiselelo esisheshayo, amabhodi odonga akhiqizwayo abonisa ancishisiwe…
I-Ultrasonic Protein Extraction kusuka ku-Tissue and Cell Cultures
Ukukhishwa kwamaphrotheni kuyisinyathelo esibalulekile sokulungiselela isampula kuma-proteinomics. Amaphrotheni angakhishwa ezitshalweni zezitshalo nezilwane, ama-yeast nama-microorganisms. I-Sonication iyindlela ethembekile, ephumelelayo yokukhishwa kwamaprotheni enika isivuno esikhulu samaprotheni ngaphakathi kwesikhathi esifushane sokukhipha.…
Ama-Nanoemulsions - owaziwa nangokuthi ama-miniemulsions noma ama-submicron emulsions - asetshenziswa ezinhlobonhlobo zezicelo ku-chemistry, upende & imichilo, izimonyo, imithi nokudla. Izinhlelo ze-Ultrasonic zaziwa njengamathuluzi athembekile ekukhiqizeni okude…
Ukukhishwa okuvamile kwamafutha abalulekile kuyabiza futhi kuthatha isikhathi. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kunikeza isivuno esiphakeme nekhwalithi ephezulu yokukhipha. I-Ultrasonic ingenziwa njengendlela yokususa- noma yokususelwa emanzini-esekwe emanzini. Ngenye indlela, i-sonication ingahlanganiswa nezinhlelo zokukhishwa kwendabuko…
Ukukhishwa kwe-cannabis ku-glycerin kuyindlela ekhululekile yokukhipha ama-cannabinoids ngqo kusuka kwinto eyomile yesitshalo. I-cannabis glycerin igxila ingenziwa kalula kunoma yiluphi uhlobo lomkhiqizo olufakwe i-cannabis enjenge-tinctures, vapes, isithako sokubhaka, i-lotion njll Ultrasonic…
Ukukhishwa kwe-Ginger ephumelele kakhulu nge-Sonication
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kawoyela obalulekile nezinhlanganisela ezisebenzayo ezivela kukhonsathi ye-ginger ngokusebenza kahle okuphezulu nezithelo eziphakeme. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyinqubo emnene, engeyona eyokushisa enikela kakhulu kwekhwalithi ephezulu. Ngenkathi ezinye izindlela zokukhishwa zikhawulelwe ekukhuphukeni kwazo…
Ungakhiqiza i-nanoemulsion ye-CBD ku-batch noma kwimodi eqhubekayo usebenzisa umshini we-emulsization we-ultrasonic. Ama-Hielscher ama-homogenizer e-Hielscher angama-emulsifiers anamandla ukukhiqiza nano-emulsions ye-CBD ezinzile. Ukukhiqizwa kwe-ultrasonic kwama-cannabis uwoyela emulsions (o / w) kulula futhi…
Ngenxa yesidingo esandayo sezimonyo ze-eco-friendly, imboni yezimonyo igxile ekwakhekeni kwama-emulsions we-survilant-free. Ama-emulsions we-Pickering enza i-survivant- / emulsifier-free w / o- noma o / w-izingxube ziqinisiwe izinhlayiya. Ukuxubana kwe-Ultrasonic kanye ne-emulsation kuyindlela enhle yokwakha…
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic ye-Flavor Izithako
Isizinda se-Ultrasonic sonyusa isivuno futhi sinciphise isikhathi senqubo. I-Ultrasound ingukhiye-ubuchwepheshe bokukhishwa okuluhlaza okuqhubekayo njengoba kuyinqubo ephephile isebenzisa i-sol sol green eluhlaza. Ngaphezu kwalokho, inamandla aphezulu kakhulu. I-Botanical Extracts Isizinda se-Ultrasonic siyathengiswa…
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic-Enzymatic Diacylglycerol
Diacylglycerol (DAG) rich oils have shown a high nutritional value since they are digested and metabolized in a way, which significantly reduces body weight. Diacylglycerol can be produced by the hydrolysis of palm oil using a commercial lipase as…
I-Ultrasonics iyindlela ephumelelayo yokuvuselela ama-microorganisms ngama-vibrations angomakhenikha kanye ne-cavitation. Ku-sonobioreactor / i-Fermenter ye-sonobiore, ukwelashwa kwe-ultrasonic kwamangqamuzana nezicubu kuguquguquka kakhulu ngoba izici zezemvelo zinganqunywa ngokuqondile. Nge-ultrasonic…
Ultrasonic Ekwakhiweni ka kwagcizelela Inhlanganisela
Ama-composite akhombisa izindawo ezibonakalayo eziyingqayizivele njenge-thermo-stability eqinisiwe, i-modulus e-elastic, amandla okuqina, amandla okuqhaqhaza futhi ngakho-ke iyasetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni imikhiqizo ehlukahlukene. I-Sonication iboniswe ukukhiqiza ama-nanocomposites aphezulu kakhulu nge-CNTs ehlakazekile kakhulu, i-graphene…
I-EPA3550 i-Ultrasonic Extraction Guide
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela eluhlaza, enobungani bemvelo engasetjenziselwa amasampula amancanyana welebhu kanye nokukhishwa kwamakhemikhali abalulekile esikalini sokukhiqizwa. I-United States Environmental Protection Agency (EPA) incoma ukuthi a…
I-Drill fluid (udoti wokumba) isetshenziselwa ukusiza ukumba imithombo kawoyela, imithombo yegesi yemvelo, imithombo yokuhlola (imithombo yasendle) noma imithombo yamanzi. Ama-reactors e-Ultrasonic angubuchwepheshe obusebenzayo bokuxuba, ukusabalalisa, ukukhipha kanye nokuhlanza udaka olususelwe emanzini…
I-Ultrasonic Powder Compacting
I-Hielscher Ultrasonics yenza amadivayisi wokuphazamiseka kwe-ultrasonic kweziqukathi, izitsha, iziphenduli noma amakholomu. Ukudlidliza kwe-ultrasonic kunganyakazisa izinhlayiya ze-powder ngemuva kokugcwaliswa, ukuze kutholakale ipakethe ye-powder e-denser noma efanayo. Ubuningi besisindo noma ukupakisha kwabantu…
Ama-carbal charcoal nama-carco asetshenziswayo asetshenziswa kabanzi kwimikhiqizo yezimonyo, yezokwelapha nezimboni. Ngemiphumela emihle, amalahle asebenzayo kumele ahlakazeke ngendlela efanayo: Uma ubungako bezinhlayiya buba buningi, okukhona kuba namandla okuqhamuka ngaphezulu kwezinhlayiyana, kuba ngcono umsebenzi. Ukusakazwa kwe-Ultrasonic…
Imisebenzi e-Hielscher Ultrasonics
We are glad that you are interested in joining our company! For the reinforcement of our team we are always in the search for engaged and skilled coworkers and trainees. Our core competence lies in the development and manufacture…
Ukugawulwa kwembewu nokusanhlamvu kwe-Ultrasonic kuholela ekuhlumeni okuphelele futhi okusheshayo nezithelo eziphakeme zezitshalo. I-Ultrasonication ikhulisa ukuthathwa kwamanzi kanye nomanyolo kungena okusanhlamvu yembewu. I-priming ye-ultrasonic yembewu iyindleko ephansi elula…
Ama-inks we-tattoo ama-inks akhethekile asetshenziselwa i-pigmentation yesikhumba yokufakelwa. Ama-inks asatshalaliswa avamile ngenxa yokusebenzisa kwawo okuphephile futhi okulula. Ngemiphumela ebanga umbala kakhulu, kudingeka ukuthi kube nokuhlakazeka okukhona nokuzinzile kwama-pigment. I-Ultra enamandla…
Ukonakala kwe-Microbial kungalimaza ukwakheka ngopende okuphathelene namanzi kanye nokweqile. Imithetho yezemvelo ivimba ukusetshenziswa kwama-biocides. I-Sonication iyindlela enobungani bemvelo, ephumelelayo yokulondolozwa ngopende. I-Ultra Power ivumela ngisho ukuphinda isetshenziswe ngopende kanye nezinto zokugcotshwa ezinamagciwane amancane.…
Ukungaqapheli Ukuqapha Ukuqapha Nge-Ultrasound-Thermography
I-Thermography ejabulisa i-Ultrasound iyindlela ephakeme yokutholwa kwemfucumfucu emabhodini ezinkuni, ngamapaneli nasezindongeni. I-thermography ye-ultrasonic inikezela ukutholwa okunembile kakhulu, okunembile futhi okusheshayo ngaphandle kokulimaza impahla ehloliwe. Njengendlela yokuthola engonakalisi eyonakalisayo, i-ultrasonic…
Bhala Indawo Yakho Yokuhlala
Ukwenza lula ukuhlela kwakho kokuhamba, iHielscher Ultrasonics ihlanganyele ne-pentahotel. Lapho ubhuka igumbi ngezixhumanisi ezingezansi, uthola isaphulelo sika-10% esilinganisweni sangempela sansuku zonke. Sebenzisa isixhumanisi sokubhuka ngezansi ukuthola isaphulelo esingu-10% ku-…
I-Ultrasonic Lysis ye-Western Blotting
I-blot entshonalanga inqubo yokuhlaziya ukutholwa kwamaprotheni athile kusampula ye-tishu homogenate noma ukukhishwa kweseli. Ukuze usebenzise i-Western blot noma ukukala umsebenzi we-enzyme, ama-assows amaningi adinga ukufinyelela ezintweni zokwenziwa…
I-Ultrasonically Cold Brew Tea
I-Ultra enamandla iyindlela efakazelwe yokususa okunambitheka okukhulu, ama-polyphenols nezithako ezisebenzayo ezitshalweni. Itiye elibandisiwe elibandayo linikeza izinzuzo eziningi, kufaka phakathi izithako ezisebenzayo ezingaphezulu kwezinzuzo zezempilo kanye nokunambitheka okubushelelezi. Njengoba…
I-Port Splitter ye-RJ45-HUB ye-Ultrasonic Processors
I-split splitter RJ45-HUB ikuvumela ukuthi uxhume iprosesa yakho ye-ultrasonic kuzakhi ezahlukahlukene ezengeziwe futhi usebenzise zonke izici zeprosesa yakho ye-digital ultrasonic. Ngaso leso sikhathi, ukusebenza kwenethiwekhi kuyagcinwa. I-RJ45-HUB…
Ukuhlangabezana nesidingo esikhulayo nokunikeza ama-cannabinoids asezingeni eliphakeme, indlela esebenza kahle nethembekile yokukhishwa kwe-cannabis inkulu. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kufakazelwe ukufinyeza isikhathi sokukhishwa futhi ukukhuphula isivuno kakhulu. Ngamandla e-ultrasound, insangu…
Ama-nanoparticles esiliva (ama-AgNPs) asetshenziswa kaningi ama-nanomatadium ngenxa yezakhiwo zawo ezilwa ne-microbial, izakhiwo ze-optical kanye nokwenza okuphakeme kukagesi. Indlela ye-sonochemical esebenzisa i-kappa carrageenan iyindlela elula, elula futhi enobungani bemvelo yokulungiselela izinhlayiya zesiliva.…
Ultrasonic Ukuguqulwa Starch Granules Slurries
Isitashi sikhishwa kalula emithonjeni yendabuko, njengamazambane, ummbila noma ummbila. Ukuguqulwa kwesitashi kuyadingeka ukuthuthukisa izindawo ezibonakalayo nezamakhemikhali. Ama-reactors e-Hielscher ultrasonic akhuthaza ukuguqulwa ngokomzimba, amakhemikhali, kanye ne-enzymatic yesitashi okuholela kuyo…
I-Ultrasonic Disintegration ye-Animal Manures ngaphambi kwe-Anaerobic Digestion
Ultrasonic disintegration increases methane (CH4) yield, decreases solid retention time (SRT) and improves the overall performance of anaerobic digestion. This is the result of the disintegration of biosolids and bacterial cells in animal manures and the release of intracellular…
I-GDmini2 – I-Ultrasonic Inline Micro-Reactor
I-GDmini2 iyi-ultrasonic micro-reactor ye-sonication engaqondile, elawulwa ukushisa yemithombo yezindaba ewuketshezi. Izicelo zifaka: i-Homogenization, i-emulsification, i-particle synthesis, i-solvent extraction, i-cell lysis nokuqhekeka. I-GDmini2 iyi-homogenizer ye-ultrasonic ngokuma kwengilazi eqondile…
I-Probe-Type Sonication vs. Bath Ultrasonic: Ukuqhathaniswa Okuphumelelayo
Izinqubo ze-Sonication zingenziwa ngokusetshenziswa kwe-homogenizer ye-probe-hlobo noma ukugeza kwe-ultrasonic. Noma, womabili la makhono asebenza nge-ultrasound kusampula, kunomehluko omkhulu ekusebenzeni kahle, ekusebenzeni kahle kanye nasekwenzeni inqubo. Imiphumela oyifunayo…
I-TecnoVeritas iyinkampani ehamba phambili yobuchwepheshe basolwandle obusha. I-TecnoVeritas 'Enermulsion uhlelo lwe-emulsion olusebenzisa i-HFO oluhlanganiswe ngempumelelo emikhunjini yasolwandle ukunciphisa ukuphuma kwe-nitrous oxide (NOx), isikhutha (CO2), i-carbon monoxide (CO) kanye…
Ukukhiqiza kwe-Agrochemicals ye-Ultrasonic
I-agrochemicals esetshenziswayo ifaka ukusakazwa, ukuncibilikisa, ukuqothula, kanye nokuqomanisa amakhompiyutha. I-Ultrasound iyindlela ethembekile yokuxuba yokumiswa kwamakhemikhali esezingeni eliphakeme. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic nokuqeda kuvumela ukukhiqiza ukwakheka komthwalo omkhulu ngesivinini esikhulu sokuhlakazeka. Ukusungulwa kwe-Ultrasonic…
Ultrasonicators for UkuPhenya Forensic
Ultrasonic devices are used for two major applications in forensic labs: for extraction and cleaning. Ultrasonic extraction is used to obtain targeted substances such as DNA, drug components or other active compounds. Ultrasonic cleaning is an effective tool to…
I-Power Ultrasound Yokukhiqiza I-Cosmetics
Ukucubungula kwe-Ultrasonic kunenkundla eminingi yesicelo ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izimonyo nokunakekelwa komuntu siqu. Izicelo ze-ultrasonic embonini yezithokozi zihlanganisa ukukhipha imfucuza, ukusabalalisa, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana, ukulungiswa kwe-liposome, nokukhishwa kwamakhemikhali asebenzayo. Imishini ye-ultrasonic iyatholakala…
Isevisi yokucubungula nge-Ultrasonic Custom
I-Hielscher Ultrasonics ispecial uma kuziwa ekusebenzeni kwe-ultrasonic. Asigcini ngokuhlinzeka ngama-ultrasonicators anamandla elebhu kanye nezimboni, kodwa sikunikeza insizakalo ukucubungula impahla yakho njengomakhi wethrafikhi we-ultrasonic at our headquarter in…
Hielscher – Senza Ultrasonics!
To deliver you with the best quality and service for your process, we at Hielscher Ultrasonics manufacture our range of products ourselves. From idea, development and CAD drawings to machining, assembly and testing, we take great satisfaction and have…
Ukusetshenziswa kwama-emulsion wamanzi-kumafutha kukhula ngokushesha ngenxa yezimiso zemvelo eziqinile nomncintiswano onamandla emakethe yezokuhamba. Ubuchwepheshe be-emulsation be-ultrasonic buvumela ukusetshenziswa kwamafutha kahle, njengamafutha asindayo noma…
Ngaphezu kweminyaka engama-20 yesipiliyoni ekusebenzeni kwe-ultrasonic kwenza uHielscher uchwepheshe oholayo wezinqubo ze-ultrasonic zezimboni. Siqondisa amakhasimende ethu kusuka kwinqubo yawo yokuqala yemibono ngokusebenzisa inqubo yokufinyelela enkulwaneni lokugcina ekukhiqizweni kwezohwebo - ukuthuthukisa…
I-Ultrasonic Ballast Water Disinfection
Uhlelo lokwelashwa lwe-ultrasonic lukhombise ukusebenza kahle ekubulaweni kwamagciwane, ama-plankton kanye nezinto ezinkulu. Ukubulala amagciwane kwe-Ultract kwamanzi e-ballast kuyindlela yokwelashwa / engokomzimba, evimbela ukumiswa kwanoma yikuphi ukuqina okusebenzayo nokubizayo…
Ultrasonic Isizinda of yeselula Matter
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic noma ukukhishwa kwe-sono kuyinqubo ekhulisa ubuchwepheshe, esebenza ngokuhlanganiswa kwamandla aphezulu e-ultrasonics ekuthambekeni kwesitshalo noma kwezicubu zamaseli. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngama-ultrasonicator athembekile okuphazamiseka kweseli nokukhipha kwelebhu encane…
I-Ultrasound-Enhanced Mineral Carbonation
I-Mineral carbonation ukusabela kwe-carbon dioxide ngamaminerali we-alkaline njenge-calcium noma i-magnesium oxide. I-Mineral carbonation isetshenziselwa ukwenziwa kwezimboni zezinhlayiya eziqinile embonini yezemithi, polymer kanye nomanyolo…
I-All-In-One Sample Preparation Unit UP200St_TD
Idivaysi ye-200 Watts ultrasonic UP200St_TD inikezela ngokuguquguquka okubanzi njengoba leyunithi eyisisekelo ivumela ukusetha okungatheni okuhluke ngokuphelele kathathu. Uhlelo oluyisisekelo luqukethe i-top-phansi transducer UP200St_TD eqhutshwa yi-200 watt generator (UP200St-G) suppling…
I-Hielscher Ultrasonics ebanjwe ngesandla noma emi ngezinyawo yama-ultrasonic iqondisa amaza amakhulu kakhulu we-ultrasonic ekuvulekeni kocingo luyafa, iziqondisi zensimbi, umfeli we-extruder uyafa, amapuleti angaphandle noma ama-spinnerets. Lokhu kuhlanza iziteshi ezinhle futhi okuphezulu emizuzwaneni ukusuka: amafutha namafutha…
Ukuphina ngemicu ye-polymer ukuze isetshenziswe ezindwangu nasezindongeni kuyindlela ekhethekile ye-extrusion, esebenzisa i-spinneret ukwakha izihlungi eziningi eziqhubekayo zokwenziwa. Ama-Ultrasonics angasetshenziselwa izinhlobo ezahlukahlukene zokuswayipha: owomile, onamanzi, oncibilikisiwe futhi…
Ukuze kubalingwe kukalwe nezinhlayiyana eziyinhloko, izinhlayiya kufanele zihlakazeke kahle njengoba ama-agglomerates eqamba imiphumela yokulinganisa. I-Ultrasound iyithuluzi elithembekile lokuqothula ama-agglomerates nokwakha izimo lapho izinhlayiya eziyinhloko zibanjwa khona…
I-Ultrasonic Coal Treatments yokukhiqizwa kwamandla
I-sonication ye-slurries yamalahle inomthelela ezinhlelweni ezahlukahlukene ngesikhathi sokukhiqizwa kwamandla kusuka kumalahle. I-Ultrasound inyusa i-hydrogenation evuthayo ngesikhathi se-liquefaction yamalahle. Ngaphezu kwalokho, i-sonication ingathuthukisa indawo engaphezulu kanye nokukhishwa kwamalahle. Ukusabela okungathathi hlangothi kwamakhemikhali…
I-Ultrasonic Spraying, Nebulizing, ne-Atomizing
Ukudlidliza kwe-Ultrasonic kungadala amaconsi amancanyana kakhulu. Ngesikhathi sokufafaza nge-ultrasonic, ubukhulu bamaconsi nokusatshalaliswa kungalawulwa ngokuqondile ukuze amaconsi amancane nezinhlayiyana zikwazi ukufafazwa. Ngaleyo ndlela, kukhiqizwa izinhlayiya ezinendawo ephezulu. I-ultrasonic…
Ultrasonic Leaching of Metals Eyigugu
I-Power ultrasound iyindlela ephumelelayo yokukhipha izinsimbi ezinjengezinsimbi eziyigugu nomhlaba ongandile. Le nqubo yokukhipha i-solid-liquid isizinda eyaziwa ngokuthi yi-sono-leaching, lixiviation noma ukuwasha. Ama-ultrasonicators amakhulu wezezimboni angafakwa kalula ukuvuza…
Isisetshenziswa se-Ultrasonically Assisted Catalytic
Ama-Hielscher ama-reactors e-ultrasonic asetshenziswa ezimbonini eziningi ukusiza nokwenza ngcono ukucubungula okukhishwa ngamandla (i-CEP) noma okubizwa ngokuthi yi-phase-ukudluliselwa isizinda (PTE). Ukukhishwa kweCatalytic kufaka uhlelo lwesigaba esingenakulinganiswa, njenge-liquid-liquid noma i-liquid-solid. Ultrasonic ukugunda okukhulu futhi…
I-Power Ultrasound ye-Particle Treatment: Amanothi Wokufaka Isicelo
Ukuveza izimfanelo zabo ngokuphelele, izinhlayiya kufanele zakhiwe dagglomerated futhi zihlakazeke ngokulinganayo ukuze indawo yezinhlayiya itholakale. Amandla e-ultrasound anamandla aziwa njengamathuluzi wokuhlakaza athembekile nokwembila adonsa izinhlayiya phansi ku-submicron- kanye nano-size. Ngaphezu kwalokho,…
I-UIP2000hdT entsha yedijithali entsha yedijithali yiprosesa enamandla yokwenza izindlela zokwelapha uketshezi ebhentshini eliphezulu nezimboni. Izicelo ezijwayelekile zifaka i-homogenization, i-emulsation, i-dispers & kuyizinhlayiyana emihle yokugaya, i-lysis & isizinda, ukunyakaza noma ukusabela kwe-sonochemical njengokuthi…
I-Hydroxyapatite (HA noma i-HAp) i-ceramic ejwayelekile kakhulu yezinjongo zezokwelapha ngenxa yesakhiwo sayo esifanayo nezinto ezibonakalayo zamathambo. I-synthesis ye-ultrasonically esiza (i-sono-synthesis) ye-hydroxyapatite iyindlela ephumelelayo yokukhiqiza i-nanp eyakhiwe nge-nanp ngekhwalithi ephezulu…
Thuthukisa ama-Scavengers wakho nge-Ultrasonic Mixing
I-scavenger iyinto yamakhemikhali engezwa engxenyeni ukuze isuse noma ikhiphe ukungcola futhi ihambise imikhiqizo yangaphandle. Ln ukusabela okuningi, okusetshenziswa ngokweqile kwezinto zokuqalisa kusetshenziselwa ukushayela impendulo yesigaba sokuphendula…
Ukunciphisa i-Sonochemical ye-Palladium Nanoparticles
IPalladium (Pd) yaziwa kakhulu ngemisebenzi yayo yokuthonya kepha futhi isetshenziswa kaningi kucwaningo lwezinto zokwenziwa kanye nokukhiqizwa kwe-elekthronikhi, umuthi, ukuhlanzwa kwe-hydrogen, nezinye izinhlelo zamakhemikhali. Ngendlela ye-sonochemical, ehlakazekile i-mono kanye ne-palladium nano ehlanganisiwe…
Ultrasonic Ukwelashwa of Nanoparticles for Pharmaceuticals
I-Ultrasound ingubuchwepheshe obusetshenzisayo obusetshenziswa ngempumelelo ekwakhekeni kwe-sonochemical, deagglomeration, dispersion, emulsifying, functionalization kanye nokwenza kusebenze izinhlayiya. Ikakhulu kuyi-nanotechnology, i-ultrasonication iyindlela ebalulekile yokwakheka nezinqubo zokucutshungulwa kwezinto zokwenziwa ngosayizi nano. Kusukela…
Ngaphambi kokuhlanzwa noma ukuhlukaniswa kwe-macromolecule ye-intracellular efana namaphrotheni, ama-organelles, ama-enzyme noma ama-compounds asebenzayo, indlela ephumelelayo ye-tissue lysis ne-cell disintegration iyadingeka. I-ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokulungiselela iseli ekhishwa impahla ye-intracellular…
Sonication of Wine – Izicelo Ezintsha ze-Ultrasound ku-Wineries
I-Ultrasound iyindlela yoku-non-Thermal process, esetshenziswa kabanzi embonini yokudla ngenxa yohlelo lwayo olumnene kepha imiphumela ebalulekile kumkhiqizo. Kwama-wineries, i-sonication inikezela ngezinhlelo ezahlukahlukene njengokukhishwa kwe-flavour,…
Ukulungiswa kwezixazululo kuyisinyathelo esibalulekile samasampula welebhu kanye nokukhiqizwa kwezimboni. Ngokuvamile, amasampula welebhu kumele abhalwe phansi ngaphambi kokuhlaziywa. I-homogenization ye-Ultrasonic nokuqeda kuyindlela esheshayo nethembekile yokulungiselela amasampula…
In laboratories, it is often necessary to prepare multiple samples simultaneously at the same process conditions. The VialTweeter enables for the simultaneous sonication of up to 10 vials at the same intensity. Thereby, the VialTweeter is a reliable lab…
Ukuqhekeka kwamangqamuzana noma i-lysis kuyingxenye ejwayelekile yokulungiswa kwamasampula nsuku zonke ezindaweni zokucwaninga ze-biotech. Umgomo we-lysis ukuphazamisa izingxenye zodonga lweseli noma iseli eliphelele ukukhipha ama-molecule emvelo. Okubizwa ngokuthi i-lysate can…
I-Ultrasound yaziwa kakhulu ngomthamo wayo wokukhishwa. Ukukhishwa okususwayo kwe-ultrasonically kwasiza okusebenzayo, ukunambitheka kanye nezinongo ezivela ezintweni zezitshalo kuyinto yesicelo esiphumelelayo kakhulu njengoba ukwenziwa kwe-patis enobuthi ekhiqizwa ngokuqondile kungaphazamisa amaseli wesitshalo futhi kuthuthukise ukuhanjiswa okuningi…
I-Power Ultrasound ye-Improvement of Juices & Smoothies
Abaphenyi abavela eYunivesithi Yobuchwepheshe iBerlin bathola ukuthi i-ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokucubungula ukuthuthukisa amajusi wezithelo nemifino kanye nama-smoothies. Ukuba yindlela yokudla engeyona eyondlayo yokudla, i-ultrasound inikezela ukwelashwa okunobumnene kodwa okusebenzayo lokho…
Isizinda se-Ultrasonic se-Caffeine
Sebenzisa i-ultrasonics kuyindlela ephumelelayo yokukhishwa kwe-caffeine nezinye izinto ezisebenzayo zekhofi. Amadivaysi anamandla we-ultrasonic asiza inqubo yokukhipha ngenkathi ikhulisa isivuno kanye nesikhathi sokunciphisa sinciphisa. Ikhofi - eyenziwe kubhontshisi wekhofi oyosiwe -…
I-Ultrasound induces futhi ithuthukise ukusabela kwamakhemikhali kwe-polymerization ye-latex. Ngamandla e-sonochemical, ukuhlanganiswa kwe-latex kwenzeka ngokushesha futhi kusebenza kahle. Ngisho nokusingathwa kokuphendula kwamakhemikhali kuba lula. Izinhlayiya zeLatex zisetshenziswa kabanzi njengezengezo…
I-Ultrasonication ivuselela ukuphendulela kwe-Suzuki
ISuzuki Cross-Coupling (eyaziwa nangokuthi iSuzuki-Miyaura Coupling) iyindlela yokusabela enenhloso yokuhlanganisa okuphuma kokunye okuphathelene ne-biphenyl, ama-vinyl aromates (isib. Ama-polyrenes), ama-poly-olefins, kanye nama-alkyl bromides. Izinto zokwakha ezisetshenziswayo yi-aryl- noma i-vinyl-boronic acid…
I-Ultrasonic synthesis ye-graphene nge-graphite exfoliation iyindlela ethembekile futhi enenzuzo yokukhiqiza amashidi wekhwalithi ephezulu ye-graphene ngesilinganiso sezimboni. Ama-processor aphezulu we-Hielscher's high-performance processors an controll kahle futhi angakhiqiza ama-amplopes aphezulu kakhulu ekusebenzeni kwe-24/7. Lokhu…
I-Ultrasonically Induced and Enhanced Phase Transfer Catalysis
I-Ultra enamandla amakhulu yaziwa kakhulu ngeqhaza layo ekuphendukeni okuhlukahlukene kwamakhemikhali. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-sonochemistry. Ukusabela kwe-Heterogeneous - futhi ikakhulukazi ukusabela kokudluliswa kwesigaba - yizinsimu zesicelo ezinamandla kakhulu we-ultrasound. Ngenxa yemishini futhi…
UTR200 – I-Ultrasonic Cup Horn enamandla
I-UTR200 iyithuluzi elinamandla le-ultrasonic eline-sonotrode ebunjiwe yinkomishi. Ingasetshenziswa njengendlela ephezulu yokugezela kwe-ultrasonic noma - lapho ivaliwe - njenge-reactionor ye-ultrasonic ye-inline sonication. I-UTR200 isetshenziswa kakhulu…
I-Sonication iyindlela ephumelela kakhulu yokuxuba, ukufaka i-homogenizing, i-emulsifying, i-dispersing, i-dissemgration, kanye nokukhipha uketshezi ngokusebenzisa i-ultrasonic cavitation. I-VialTweeter isebenzisa lobu buchwepheshe ezilweni ezinjengezimpophoma ze-autosampler, izinqolobane zokugcina kanye nezilwane ezi-reagent ngaphandle…
Silica, also known as SiO2, nano-silica or micro-silica is used in toothpaste, cement, synthetic rubber, high-performance polymer or in food products as a thickener, adsorbent, anti-caking agent, or carrier for fragrances and flavors. Below you will learn more about…
I-Ultrasonic Process Test Facility
Umphumela we-ultrasonication ezintweni ezahlukahlukene ungahlolwa kalula. I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza indawo yayo yokusebenza kwenqubo ye-ultrasound, ifakwe ngokuphelele ngamadivayisi we-ultrasonic, izesekeli zenqubo yokusebenza kanye nemishini yokuhlaziya, yokuhlola ukwenzeka kanye nokwenza inqubo yokusebenziseka kwesicelo sakho.…
Izindawo ezisebenzayo ngeNanoparticles
I-UIP1000hdT (1000W, 20kHz) iyithuluzi elinamandla neliguquguqukayo le-ultrasonic lokuhlola i-lab nokusebenza kwezimboni kwezilwelwe. Kusetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, njengokukhuza, ukusabalalisa & kuyizinhlayiyana emihle yokugaya, i-lysis & isizinda, ukunyakaza noma ukusabela kwe-sonochemical.…
Ama-homogenizer e-Ultrasonic angamathuluzi anamandla okuxuba nokufaka i-homogenize okuqinile-okuwuketshezi nokumiswa okungamanzi. I-homogenization ye-Ultrasonic kuyinqubo yokwenza ukuthi inciphise izinhlayiya ku-ketshezi ukuze ibe mincane ngokulinganayo futhi isatshalaliswe ngokulinganayo. I-Hielscher inikeza ama-homogenizer anamandla we-ultrasonics…
Thintana nabakwaHielscher Ultrasonics ngocingo, nge-imeyili noma vakashela umphathi wethu omkhulu eTeltow, eJalimane. Uma unentshisekelo yokuthenga nokuprosesa okuphezulu kwe-lab yakho yocwaningo noma umkhiqizo wakho wezezimboni, i-Hielscher Ultrasonics izokunikeza i-Ultrasonics efanele kunazo zonke…
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic yeSamente Namathisela Ukukhonjiswa
Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic ye-samente unamathela inikeza izinzuzo ezinkulu ze-precast ukwakha, izitshalo ezomile nezitshalo. Lokhu kufaka phakathi: Isikhathi esincane sokuqala nesethi yokugcina, isilinganiso esincane se-superplasticizer, i-hydration esheshayo neyengeziwe futhi namandla amakhulu okucindezela.…
Ama-Hielscher Cascatrodes ™ akhethekile ama-sonotrodes okuklanywa (ama-phenyl ultrasonic) we-sonication ephumelelayo emazingeni aphakeme we-ultrasonic ngamazinga aphansi noma aphakathi nendawo we-sonication - ngokuvamile ngaphansi kuka-60W / cm² nangaphansi kwama-micron amplitude angaphansi kwama-60. I-Hielscher yathuthukisa iCascatrode ™ yokucubungula ezimboni…
Njengoba izindleko zezinto eziphilayo ze-biodiesel zanda, izitshalo eziningi ze-biodiesel zizithola zisendaweni enzima. Ubuchwepheshe bokuxuba u-Hielscher obuqhubekayo bokwenza ngcono inqubo yakho yokukhiqiza ye-biodiesel ngokuphumela ezithelweni eziphakeme nangokunciphisa izindleko zakho. Kusebenza…
UP400S – Sonication enamandla yamasampuli amakhulu
400 Watts ultrasonic power - The UP400S (400W, 24kHz) is a powerful and reliable ultrasonic device for the sonication of larger samples in the lab. Typical application include: Homogenization, deagglomeration, lysis and cell disintegration, protein extraction and the emulsification…
UP200H / UP200S – Amandla we-Ultrasonic weLab
Amadivayisi we-ultrasonic lab UP200H (200W, 24kHz) ne-UP200S (200W, 24kHz) alungele kahle yonke insiza evamile ye-ultrasonic ngezinga elincane neliphakathi. Izicelo zifaka: Homogenization, disintegration, emulsation, ukuphazamiseka kweseli, i -assassing noma i-sonochemistry. Ukukhiqizwa kwalezi…
I-Ultrasonic pasteurization inqubo engeyona yokushisa yokuvimbela ama-microbes afana no-E. Coli, Pseudomonas fluorescens, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus coagulans, Anoxybacillus flavithermus phakathi kwabanye abaningi ukuvimbela ukonakala kwama-microbial nokuthola ukomelela kokudla isikhathi eside. Okungashisi…
I-emulsion iqukethe iziphuzo ezimbili ezingabonakali, ezihlakazeke kahle komunye nomunye. Ukuze uthole ama-emulsion wamanzi kawoyela, isigaba esinamafutha (isigaba esihlakazekile) sihlanganiswe ngokulinganayo esigabeni esinamanzi (isigaba esiqhubekayo). Ama-emulsifiers e-Ultrasonic asungulwe kahle ukulungiselela u-oyela-emanzini…
I-InnoREX - I-Extrusion e-PLA yokuthuthukisa i-Ultrasonically
Ultrasonic mixing, dispersing and emulsification improves the extrusion of polylactic acids (PLA). Implementing ultrasonication into extrusion lines increases yield and quality of the produced PLA. Polylactide Synthesis Polylactid acids or polylactide (PLA) is a thermoplastic aliphatic polyester, which is…
UP200St – I-Ultrasonic Lab Homogenizer Enamandla
Nge-UP200St (200W, 26kHz), i-serial yamadivayisi we-Hielscher's 200 watt ultrasonic anwetshwa yiyunithi eguquguqukayo futhi eguquguqukayo. I-UP200St entsha iqukethe i-transducer ehlukanisiwe UP200St-T kanye ne-generator UP200St-G. Ngaleyo ndlela, le yunithi yezelamani…
I-UP200Ht (200W, 26kHz) i-homogenizer ephathwa ngesandla iyingxenye yochungechunge olusha lwe-Hielscher's 200 watt homogenizer ye-25 eza nezinto eziningi ezintsha. Izici ezintsha zihlanganisa ukulawulwa kwedijithali nesikrini sokuthinta, okuzenzakalelayo…
Ukukhishwa kweTurbo kwesinamoni nge-Ultrasonics
Ukukhishwa kwesinamoni kwendabuko kudla isikhathi futhi akusebenzi kahle. Isizinda se-Ultrasonic inqubo elula, kepha esebenza kahle kakhulu yokuqinisa inqubo ezonciphisa isikhathi sokukhipha ibe ngamahora ambalwa futhi inyuke ngasikhathi sinye isivuno sikakholamu esibalulekile. Ukwenziwa kwesinamoni okuthuthukisiwe…
I-Drosophila melanogaster isetshenziswa kakhulu kumalabhorethri njengesibonelo semvelo. Ngakho-ke, kufanele kwenziwe izinyathelo zangaphambi kokuhlaziya ezifana ne-lysis, ukuphazanyiswa kwamaseli, ukukhishwa kwamaprotheni kanye nokugundwa kwe-DNA kwamasampuli e-Drosophila melanogaster. Ama-Ultrasonic dismembrators athembekile futhi ayasebenza…
The ultrasonic processor UIP250MTP allows for the consistent sonication of an entire microtiter plate within the sonotrode. It can be used for the homogenizing, dispersing, degassing or for disruption of cells. This model of the UIP250MTP…
I-TecnoVeritas’ I-Fuel Changeover System
Ngenxa yokwenyuka kwentengo kaphethiloli kanye nemithetho emisha yokuphuma kwezemvelo, ubuchwepheshe obudingekayo bayasebenza ukuze kusetshenziswe kahle izikebhe. I-TecnoVeritas 'Fuel Changeover System isebenza ngohlelo lokulawula olunobuhlakani olwenza ngokuzenzekelayo ukuxubana phakathi kwesibabule esiphakeme nesiphansi…
Lapho wenza i-biodiesel, i-kinetics yokusabela okuhamba kancane nokudluliselwa kwesisindo okumpofu kwehlisa inani lakho lesitshalo se-biodiesel kanye nesivinini sakho se-biodiesel nekhwalithi. Ama-Hielscher reactors e-ultrasonika athuthukisa i-kinetics ye-transesteration kakhulu. Ngakho-ke yehlisa i-methanol eyeqile futhi…
I-Ultrasonic Margarine Production
Isinyathelo sokuqala sokukhiqiza ngesikhathi sokwenza imajarini siqukethe ukuhlanganiswa kwamafutha emifino namafutha anamanzi nezinye izithasiselo. I-Ultrasonic emulsation aa ethembekile, inqubo efakazelweko yokulungiselela i-emulsions yokudla okuzinzile, nosayizi omuhle. I-emulsion ye-ultrasonic…
Ukuhlolwa kwe-Cavitation Erosion Testing ASTM G32-92
Kudingeka ukwenziwa i-ultrasonication ebhalayo neyisisekelo ukuze kwenziwe ukuhlolwa kokuguguleka kwegazi ngokuhambisana ne-ASTM Standard G32-92. Ama-Hielscher amadivaysi e-ultrasonic angasetshenziselwa ukuhlola okuqondile nokungaqondile kokuguguleka kwamasampula. I-Hielscher yenza amaprosesa e-ultrasonic,…
UP100H – Idivayisi Compact Ultrasonic Laboratory
Iprosesa elisebenza nge-UP100H (100W, 30kHz) liyithuluzi elifanelekile le-sonication yamasampula amancane nosayizi welebhu. Le compact, nokho inamandla, i-lab homogenizer ijwayele ukusetshenziselwa ukulungiswa kwesampula, njengokuhambisa, ukusabalalisa,…
UP50H – I-Compog Lab Homogenizer
Iprosesa ye-ultrasonic i-UP50H ijwayele ukusetshenziselwa ukwenziwa kwe-sampuli yamalebhu amancane. Le homogenizer ivumela i-emulsification ephathwa ngesandla noma emile, ehlakazekayo, yokuqedwa noma yokuphazamiseka kweseli. Iprosesa ye-ultrasonic UP50H (50 watts, 30kHz) iyi…
I-UIP1000-Exd – I-1.0kW ATEX i-Ultrasonic Mixer
I-UIP1000-Exd (20kHz, 1000W) yenzelwe i-ultrasonication yotshwala obunokuvutha, isib. Kusetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, njengokuhambisa, ukusabalalisa & particle fine milling, or homogenizing. The ATEX certified…
Ultrasonic Alternative kuya Hydrodesulfurization
Izindawo zokuhlanza i-oyili zibhekene nokuhlinzekelwa okungahlanzekile oku-sulfurous (omuncu) nokucindezela kokulawulwa kwemvelo kokuqukethwe kwesibabule kaphethiloli. Ngasikhathi sinye, izindleko ze-hydrodesulfurizationization (HDS) ezijwayelekile zikhuphuka ngenxa ye-hydrogen edingekayo. I-Ultrasonic…
Biogas is generated from sources, such as municipal organic waste, sewage sludge, muck or manure. Ultrasonication improves the digestibility of such organic material leading to more biogas and less residual sludge. Biogas is a byproduct of…
Frost & I-Sullivan Technology Intsha Yonyaka
Kuyinto ukuqashelwa Hielscher Ultrasonics innovative application of ultrasonics ubuchwepheshe kuya biodiesel yokukhiqiza ukuthi Frost & USullivan uyajabula ukuvuma umsebenzi wenkampani nge-Awards ehloniphekile ye-Technology Innovation yonyaka.…
Uju lujabulela isidingo esikhulu njengokudla nomuthi. Ukuphathwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephumelelayo yokubhubhisa izinto ezingathandeki, ezinjengamakristalu namaseli we-yeast oju. Njengobuchwepheshe bokucubungula obungewona obushisayo, bubangela ukukhuphuka kwe-HMF ephansi…
Imibuzo evame ukubuzwa ku-Ultrasonics
Ngezansi uzothola izimpendulo zemibuzo ejwayelekile ngokuphathelene ne-ultrasonication. Uma ungayitholi impendulo yombuzo wakho, sicela ungangabazi ukusibuza. Sizojabula ukukusiza.…
Switching from conventional homogenizers, hydrodynamic mixers and agitated mills to ultrasonic cavitational processing adds both cost savings and makes processing environmentally friendly. Due to the recent and continued rise in energy prices energy consumption has a…
Ukuhlukaniswa Kwe-Ultrasonic Kwamaseli
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokuqhekanisa izakhiwo zamaseli. Lo mphumela ungasetshenziselwa ukukhishwa kwezinto ezisetshenziswayo ezingaphakathi, isib. Isitashi esivela ku-matrix yeseli. I-Ultrasonication yakha ukushintshana kwamagagasi anomfutho ophakeme namaza omfutho ophansi lapho kuvezwa…
The disintegration of cell structures (lysis) by means of ultrasound is used for the extraction of intra-cellular compounds or for the microbial inactivation. Background In microbiology, ultrasound is primarily associated with cell disruption (lysis) or disintegration…
I-NOX-Ukunciphisa Amafutha / Amanzi-Emulsification
Nitrogen oxides (NOx) are known to be immediately dangerous to human and environmental health. Mobile and stationary diesel and gasoline engines are contributing largely to the worldwide NOx emissions. Emulsification of the fuel with water is…
I-Ultrasonication ithinta ukwenziwa kabusha kwe-catalyst ngesikhathi sokufakwa kwethonya ngokudluliselwa okuningi kwesisindo nokufakwa kwamandla. Ku-catalysis enkulukazi, lapho okubanga amandla okuyo kusigaba esihlukile kwabasabelayo, ukusakazwa kwe-ultrasonic kukhulisa indawo ephezulu etholakala…
I-Ultrasound ekufakweni kwe-Coating
Izingxenye ezihlukahlukene, ezifana nezingulube, izigcwalisi, izithasiselo zamakhemikhali, ukuguqulwa kwezidakamizwa kanye nezindlela zokuguqula izidakamizwa ziya kuguqulwa nokupenda. I-Ultrasound yindlela ephumelelayo yokusabalalisa nokumisa, ukuguqula nokugaya izingxenye ezinjalo zokugqoka.…
I-Ultrasonic Dispersing and Deaggomerom
Ukuhlakazeka kanye deagglomeration of solids ibe iziphuzo kuyinto isicelo ebalulekile yamadivayisi ultrasonic. I-Ultrasonic cavitation yakha i-shear ephezulu ephula i-particle agglomerates ibe izinhlayiya ezihlakazekile ezizodwa. Ukuhlanganiswa kwamapoda kube iziphuzo a…
Ukugcizelela yi-Ultrasonic Cavitation
Uhla olunhlobonhlobo lwemikhiqizo ephakathi nendawo neyabathengi, efana nezimonyo nokugcotshwa kwesikhumba, ukugcotshwa kwemithi, ama-varnish, upende nezinto zokugcoba kanye namafutha asuselwa ngokuphelele noma engxenyeni ye-emulsions. I-Hielscher yenza imboni yezimboni ezinkulu kunazo zonke emhlabeni…
Mayelana ne-Hielscher Ultrasonics
Hielscher Ultrasonics is a family owned business, located in Teltow near Berlin (Germany). The main emphasis of its activities is the conception, development and production of ultrasonic devices for the use in laboratory and for manifold…
I-Ultrasonication iphephile & indlela ephumelelayo ye-tishu homogenization. Izicelo ze-Ultrasonic zifaka izicubu zokulungiselela nama-emulsion, ukukhishwa kwamaprotheni, iDNA / RNA nezinto ezisebenzayo, noma ukwenziwa kwe-activation / inactivation kwama-enzyme nemvubelo. Ukukhalipha okuqondile kwe…
Ultrasonication and Izicelo Its ezininginingi in Food Processing
I-ultrasound yamandla inikeza amathuba amaningi okusebenza okusebenzayo okuthenjelwa kokudla. Izicelo ezivame kakhulu embonini yokudla zihlanganisa ukuxuba & i-homogenization, i-emulsification, ukuhlakazeka, ukuphazanyiswa kwamaseli nokukhishwa kwento yangaphakathi kwamaselula, ukwenza kusebenze noma ukwenziwa kungasebenzi kwama-enzyme (okuyinto…
Manufacturing wire and cable, rods, tapes, tubes and fasteners requires lubrication. Before further processing, such as galvanizing, extrusion or welding, the lubricant residues need to be cleaned off. Hielscher Ultrasonics offers you a unique ultrasonic cleaning…
Microalgae can be grown in shallow ponds or photo-bioreactors. In bioreactors, an algae film tends to grow on the inner reactor surface, blocking sunlight and restricting photosynthesis. Ultrasonic cleaning - applied from the outside - removes…
Ultrasonics kuVinegar Ukukhiqiza Nokuguga
Uviniga, ofana nebhalsamu kuyisithako esibalulekile cuisine. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa izinqubo eziningi ekukhiqizeni nasekuvuthweni koviniga. Isendlalelo Ekukhiqizeni Uviniga Ukukhiqizwa kweviniga, ikakhulukazi ephezulu…
Uchungechunge olusha lwamadivayisi we-Hielscher wezimboni ze-ultrasonic abonisa ubukhulu bawo: Abasebenza kwephrosesa be-ultrasonic abane-500W kuze kufike ku-4000W baqinisekisa ngamandla aphezulu we-Ultra kanye nokwethenjwa, abathengi bakaHielscher abajwayele, kepha badlula ngenxa yabo…
Ukuqhafaza - Umthelela We-Power Ultrasound ku-Breaking Particle
I-Sonofragmentation ichaza ukwephulwa kwezinhlayiya zibe yizicucu ezinobukhulu obukhulu obunamandla yi-ultrasound ephezulu. Ngokuqhathanisa ne-deagglomeration ejwayelekile ye-ultrasonic ne-milling - lapho izinhlayiya ikakhulu zigaywa futhi zihlukaniswe ngokushayisana okuphakathi kwezinhlayiyana -, umbono we-sono-ehlukaniswa…
I-Ultrasonic Cavitation ku-Liquids
Amagagasi e-Ultrasonic we-high intensity ultrasound akhiqiza i-cavitation ku-liquids. I-cavitation idala imiphumela emibi kakhulu endaweni, efana namajeythi kagesi afinyelela ku-1000km / hr, ingcindezi efinyelela ku-2000atm kanye namazinga okushisa afinyelela ku-5000 uKelvin. Cishe…
I-GENO-break – I-Ultrasonic Water Disinfection
Ukwelashwa kwamanzi kwe-Gruenbeck GENO-break ®-System IV kuhlanganisa iprosesa ye-Hielscher ultrasonic enokukhanya okukhulu kwe-UV-C kokususa ukungasebenzi kwe-diski. Izithako zamanzi ashisayo kanye namachibi angathwala ama-legionella bacteria, ama-pathogen kanye nezinye izidalwa ezincanyana. ILegionella…
Biodiesel, bioethanol and biogas are three ways to convert organic material into green fuels. Ultrasonication improves energy yield and conversion efficiency. Renewable fuels enjoy increasing demand as oil prices mark new heights. The application of ultrasonic…
Izinhlayiyana, isb. Nanoparticles zingakhiwa ngaphansi koketshezi ngotshwala. Kule nqubo, ingxube engaphezulu kwesakhiwo iqala ukwakha izinhlayiya eziqinile zivela ezintweni ezigxile kakhulu ezizokhula futhi ekugcineni zinikezele. In…
Type Voltage Picture Country / Specification B 115V~ USA NEMA 5-15P Canada CSA CAN/CSA-22.2 No.21-95 Japan JIS C 8303 Taiwan CNS 6797 Thailand D 230V~ South Africa SABS 164-1 F 230V~ Belgium NBN C 61-112-1 Brazil…
I-Ultrasonics yamafutha, i-Gas kanye namafutha avuselelekayo
Izintengo zikawoyela kanye negesi lokushisa kanye nokusimama kwemithombo yamapayipi yaba yindawo ebaluleke kakhulu kulowo mafutha & gas industry. Hielscher ultrasonic devices are used in research facilities and processing plants…
Ukukhiqiza i-Nanospheres engakhiwe nge-biodegradable
Biodegradable micro- and nanospheres can be produced in a continuous, contact- and contamination-free process that can be readily run under sterile conditions. Introduction Biodegradable micro- and nanospheres (MS, NS) made of poly(lactide-coglycolide) (PLGA) or other materials…
Ultrasonication is an efficient means for the wet-milling and micro-grinding of particles. Besides dispersing and deagglomerating, the wet milling is an important application of Hielscher ultrasonic devices. In particular for the manufacturing of superfine-size slurries, ultrasound…
Umkhakha-Specific Ultrasonic Solutions
Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asetshenziselwa ezimbonini eziningi, njengamafutha athengiswayo & biomass, ukudla & isiphuzo, upende & uyinki, ukumboza, ucingo nentambo, noma ukucubungula amakhemikhali. Kusetshenziswa amadivayisi we-Algae Growth and Extraction Hielscher ultrasonic…
I-Ultrasonic Processor UIP2000hd – Ukusebenza kahle
Iprosesa elisebenza nge-UIP2000hd (20kHz, 2000W) liyithuluzi elinamandla futhi elivumelanisa nezimo elisebenzisekayo lokwenza ukucubungula kwezimboni. Kusetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, njengokukhuza, ukusabalalisa & kuyizinhlayiyana emihle yokugaya, i-lysis & extraction or…
UIP16000 – I-Processor Ultrasonic Enamandla Kakhulu
16,000 watts of ultrasonic power make the UIP16000 the most powerful ultrasonic processor in the world. It is designed to work in clusters of three or more units, for large volume processing, such as to homogenize,…
I-Ultrasonic Mini Flow Flow
Imvamisa i-ultrasound ejulile idluliselwa emabunini amancane nge-titanium sonotrode egxilisiwe kuketshezi. Le ndlela isebenza kahle kakhulu kodwa inomphumela oseceleni wokuthi kukhona ne-patrost ku-sonotrode, okuba nemiphumela…
Ukuxuba i-Ultrasonic ye-Cosmetic Industry
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziswa embonini yezimonyo ngezinqubo eziningi, isb. Ukwenziwa kwemikhiqizo emisha yezithambiso kufaka izinselele eziningi zokucubungula, njengokuhlakazeka…
Ngama-watts ayo ayi-10,000, i-UIP10000 yiprosesa yesibili enkulu kunazo zonke ye-ultrasonic. Kuklanyelwe ukusebenza ngamaqoqo amayunithi amane noma ngaphezulu, ukucubungula ivolumu enkulu, njengokwenza i-homogenizing, ukuhlakaza kanye ne-deagglomeration. Izicelo ze-Ultrasonic…
Ukuqeqeshwa Kwezobuchwepheshe Nokusebenza
I-Hielscher inikeza isevisi eningi ukusekela inqubo yakho ye-ultrasonic R&D, engineering, process testing and optimization as well as installation support and maintenance training. Hielscher's service and training programs save customers time and money. A wide range…
Ukunciphisa Ukwanda Kwe-Inkoni (isib. Inkjet)
Ultrasonic cavitation is an effective means for the dispersing and microgrinding (wet milling) of ink pigments. This technology can be used for UV-, water or solvent-based inkjet inks. Ultrasound is very effective in the size reduction…
UIP4000 – I-Power Ultra Output Power
The UIP4000 (4,000 watts, 20kHz) is used mainly for the industrial processing of liquids such as homogenizing, dispersing, disintegrating or deagglomerating. The powerful ultrasonic processor UIP4000 is used when high power is needed for continuous operation.…
UIS250L – Ultrasonic Sieving ku-Laboratory
Iprosesa le-UIS250L le-ultrasonic lisetshenziselwa ukusheshisa kwezinqubo zokuvinjezelwa ngenye indlela noma okuhambisana nokudlidliza okwenziwa nge-classical low frequency vibrators. Ikakhulu uma kwenzeka kube ne-powders powders enhle kakhulu kuvame ukuphela kwendlela yokunika amandla…
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic Ukukhonjiswa Okuphezulu Kokusebenza
The use of micro- and nanosilica or nanotubes leads to improvements in the compressive strength of high-performance concrete. Ultrasonication is an effective means for the mixing, wetting and dispersing of nanomaterials in cement or concrete. Micro…
I-Ultrasound Ekukhiqizeni Iphepha
Ultrasound can be used in manufacturing paper and in paper recycling processes for: preventing watermarks or lines that would reduce the paper quality, by degassing the pulp enhancing the fibrillation of the pulp fibres replacement and/or…
Siyabonga nge-Inquiry yakho!
We would like to thank you for your interest in our ultrasonic products. Your information request will be processed as soon as possible. In a hurry? Feel free to contact any of our offices. We will…
SonoStep – Ukulungiselela Isampula Ngesinye Isinyathelo
The SonoStep combines ultrasonication, stirring and pumping of samples in a compact design. It is easy to operate and can be used to deliver sonicated samples to analytic devices, e.g. for particle size measurement. Ultrasonication helps…
I-Solvent-Free Free Extraction nge-Ultrasound
Ukukhishwa okujwayelekile kwezingxenye ezimnandi njenge-stevioglycosides kusuka eStevia rebaudiana isebenzisa izithako ezinobuthi. Ukuthola umkhiqizo wokudla onempilo, onenzuzo, kuyadingeka indlela yokukhipha i-solvent-free. Indlela yokukhipha i-ultrasonic igwema ukusetshenziswa kwezixazululi…
Ezinhlelweni eziningi zobisi, i-whey (ubisi lwamakhasi) ivela ngamanani amakhulu njengomkhiqizo womkhiqizo. I-Whey inokuqukethwe kwe-lactose ephezulu futhi kufanele ichithwe, kuyabiza futhi kunomthelela emvelweni. Ngokuthola i-lactose nge-ultrasound, i-…
Hielscher Ultrasonics Imiqophi
Ukusekela – Ukuhlola I-Software Thuthukisa
Ukusekelwa - Ukuvuselelwa kwesoftware Bheka Ikhasimende Elithandekayo, Idivayisi yakho ye-ultrasonic ingahle ilungele ukuthuthukiswa kwesoftware yamahhala. Uma kunjalo, siphakamisa kakhulu ukusebenzisa leli thuba ukugcina iyunithi yakho isesikhathini futhi isebenzise noma yikuphi ukuthuthuka futhi…
I-Ultrasonic-Enzymatic Oil Hydrolysis
I-Diacylglycerol (DAG) uwoyela ocebile yisithako esibalulekile sokudla, i-pharma nemikhiqizo yezimonyo. I-Diacylglycerol ingakhiqizwa yi-hydrolysis yamafutha esundu kusetshenziswa i-lipase yezentengiso njengesiqalo ngaphansi kwe-ultrasonication. Ngokusebenzisa i-hydrolysis ye-ultrasonic-enzymatic hydrolysis, ama-DAGs angakwazi…
I-Ultrasonic Yokuxuba Ubuchwepheshe Bamaphilomu
Ama-homogenizer we-Ultrasonic avumela ukushumeka okusheshayo nokusebenzayo nokusabalalisa kwezidumbu, okokugcoba, okokugcoba, ukumiswa kanye nama-tinctures. I-Power ultrasound iyindlela ethembekile yokuhlanganisa yokwenza amakhambi asezingeni eliphakeme ngenxa yamandla amakhulu e-shemeter…
I-Ultrasonic iyindlela esetshenziswa kabanzi yokusabalalisa enokwethenjelwa futhi esebenza ngokufanele kanye nokuwohloka kwezinhlayiya zobumba. Ukwakheka kwama-slurries e-ceramic kumele kuxutshaniswe kahle ukuthola i-wetting ephelele kanye ne-dispersibility. Amandla e-Shear ultrash anika amandla ekusebenzeni kakhulu…
I-Algae Cultivation Algae grow Lab yathuthukisa uchungechunge lwe-tubular ne-flatobiobiactors yokulinywa kwe-algae kanye nenqubo yokubhujiswa kwe-cell ultrasonic ngokusekelwe kuma-processor e-Hielscher e-Hielscher anama-flow cell. Umdwebo wokugeleza okujwayelekile we…
Ultrasonic Synthesis yamaNanodiamond
Ngenxa yamandla ayo amakhulu e-cavitational force, i-nguvu ye-ultrasound iyindlela ethembisayo yokukhiqiza amadayimane acwebezelayo angama-micron- nano kusuka kugrafu. Amadayimane ama-Micro- ne-nano-crystalline angakwazi ukwenziwa ngomqondo wokumiswa kwe-graphite kuketshezi lwe-organic ekucindezelweni komkhathi kanye…
ultrasonic Soxhlet isizinda
I-Ultrasonics ithuthukisa isizinda seSoxhlet esivamile. Ukukhishwa kweSoxhlet okusizwa yi-ultrasonically kungaholela ezithelweni eziphakeme kanye nezikhathi ezimfushane zokukhishwa. Okokusebenza kwe-ultrasonic kungahlanganiswa kalula ne-zaklothic Soxhlet extractor. I-Soxhlet Extraction I-Soxhlet ekhishwa imvamisa…
Ultrasonic crystallization ebandayo futhi Ice Lokudla Imikhiqizo
I-Sonication inyusa i-nucleation yamakhristalu eqhwa futhi inikeze ngaleyo ndlela ukuqanda okusheshayo nokulawula usayizi we-ice crystal. I-Ultra enamandla inenzuzo ezinqubweni eziningi zokufudumeza ukudla njengezikhathi ezimfushane zokuqandisa futhi kuholela kwikhwalithi ephezulu yomkhiqizo. Ultrasonically…
I-Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) ingenye yamasu abalulekile wokuhlanganisa izinto ze-nano nokuhlanganisa izingxenyana zezingubo zokugqoka ezifushane zamafilimu. Ukufafazwa kwe-Ultrasonic kanye ne-atomization kuvumela ukulawulwa kwenqubo ephelele okuholela ekuphumeni kwekhwalithi ephezulu. I-ptrolysis yokufafaza nge-Ultrasonic…
Ultrasonic Cleaning Modules for Wire, Tube kanye Cable
I-Hielscher yenza amasistimu wokuhlanza we-ultrasonic wokususa ukungcoliswa, njengokuthambisa, uwoyela wokudweba, uthuli, ukungcola, insipho noma ukubola okuvela kumaphrofayili aqhubekayo, njenge-wire, tube, strip strip noma intambo. I-USCM - Uhlelo Lokuhlanza Amamodeli I-USCM…
Ama-brine ayisixazululo sikasawoti, isb. NaCl, KCl, KNO3, KClO3, CaCl3 emanzini, alungiselelwe imboni yokudla, ukulima izinhlanzi noma uketshezi lokumba. Inqubo yokuqeda usawoti emanzini ingadla isikhathi, uma kungenjalo noma…
Kuvaliwe i-Ultrasonic Reactor ye-Processing Process Batch Processing
Izinqubo eziningi njengokuxuba, ukusabalalisa nokukhipha izinto zenani eliphakeme zenziwa njengenqubo ye-batch. I-reactor ye-Hielscher evaliwe ye-Ultrown ilungele ukucubungula okuhlanganisiwe kwe-ultrasonic ngaphansi kwezimo ezivalekile nezilawulwa ngokufanele. Isiyaluyalu esivaliwe se-Hielscher sika-ultrasonic silingana ngokuphelele…
Ultrasonic Bentonite Ukuhlakazeka
Ama-Bentonite clays, anjenge-sodium bentonite, i-calcium bentonite ne-potassium bentonite, asetshenziswa ikakhulukazi njengezengezo zamanzi okumba, i-binder, purifier, adsorbent, nanjengesithiyo samanzi angaphansi komhlaba. Ngenxa yokuqina okuqinile namabutho e-van der Waals, ukusatshalaliswa kwe…
Izinhlayiya ze-nano ezenziwe ngendlela eyakheke kahle zinezinhlelo eziningi zokusebenza ekwakheni ama-electrooptics, ukugcinwa kwemininingwane ye-optical, kanye nokusetshenziswa kwe-biochemical, biioanalytical and medical application. I-Sonication iyindlela ephumelelayo nethembekile yokuhlanganisa izinhlayiya ze-nano ze-fluorescent…
I-Fermentation Fermentation ingaba inqubo ye-aerobic (= oxidative Fermentation) noma inqubo ye-anaerobic, esetshenziselwa izinhlelo ze-biotechnological ukuguqula izinto eziphilayo nge-bacterial, fungal noma amanye amasiko we-biological cell noma ngama-enzyme. Ngokuvutshelwa, amandla akhishwa ku…
I-Ultrasonic Crystallization ne-Precipitation
I-Ultrasound iqala futhi ithuthukise i-nucleation kanye ne-crystallization yama-molecule e-organic. Ukulawulwa kokubhekisisa i-crystallization nezinqubo zezulu kubalulekile ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo. Izinzuzo eziphambili ze-crystallization ye-ultrasonic kanye kwezulu eceleni kokulawulwa kwenqubo ephelele…
I-Molecular Cuisine kanye nezinye Izicelo Zezempilo
Umhlahlandlela omfushane kulezi zimiso nguMark Gaston Okuningi okuqukethwe kulo mhlahlandlela imininingwane etholakala kalula, noma kunjalo kwesinye isikhathi ibhalwa ngendlela engahlali yenza ukufunda kube lula ngaphandle kokuthi kwenzeke…
BIOMAN – I-Ultrasound ye-Biomass Digestion
Amandla akhiqizwa kusuka kuma-biogas ungenye yezinsiza ezibaluleke kakhulu ezingavuseleleka futhi anomumo ngokuhlinzekwa kwezindawo ezingaphansi kanye nezinto zokulahla udoti ezihambisana nokusetshenziswa okusebenzayo komhlaba olimekayo, nokudla okuphephile nokukhiqizwa kokuphakelayo. I-BIOMAN yi-…
I-Ultrasonics ye-Vaccine Production
I-Ultrasonics yindlela efakazelwe yokuqeda noma ukungasebenzi ngamagciwane, amagciwane kanye nemvubelo. I-Ultrasonics ithembekile ekuhlolweni kwamaseli, isb. Ama-viral noma ama-bacterial cell kanye nokudedelwa kwento ethinta imvelo, isib. Amaprotheni, iDNA / RNA, ama-enymes nama-bioacpent. I-Ultrasonic…
I-Ultrasonic Particle Ukuguqulwa kwamakholomu we-HPLC
Izinselelo ku-HPLC ukwahlukanisa okusheshayo nangokufanele kwezinhlobo eziningi zamasampula. I-Sonication ivumela ukuguqula nokusebenzisa izinhlayiya ze-nano, isib. I-silica noma i-zirkonia microspheres. I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokuhlanganisa i-core-shell silica…
Isingeniso I-Ultrafine izinhlayiya ezinobukhulu obukhulu kanye nezinhlayiya ezicijile eziyindilinga, ukumbozwa kwamafilimu, imicu, izinto zokuhlobisa kanye nezindandatho, kanye ne-aerogels nama-xerogels angama-porous angaba izithasiselo ezinkulu kakhulu ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwezinto zokwenziwa okuphezulu. Izinto zokwakha ezithuthukisiwe, kufaka phakathi…
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kwe-Xanthan ne-Guarms Gums
Izinto zokunciphisa izinwele ezifana ne-xanthan gum kanye ne-gar gum zisetshenziselwa kabanzi njengezinguquko zerheological. Ukuze usebenzise ngokugcwele amandla we-xanthan gum noma i-gar gum, izimpuphu kumele zihlakazeke ngendlela efanayo kusakhiwo.…
Metal-Organic Framework zingxube eziyakhelwe kusuka ku-ion wensimbi kanye nama-molecule e-organic ukuze kukhiqizwe into-, emibili, noma emithathu yomsuka we-hybrid. Lezi zinhlaka ze-hybrid zingaba zinwele noma zingadabuli futhi zinikeze ukusebenza okuhlukahlukene. Ukuqanjwa kwe-sonochemical of MOFs…
Ama-mixers we-Ultrasonic High Speed ​​Batch
I-Wetting, hydration, homogenization, ukugaya, ukuhlakazeka, ukuqeda kanye nokuqeda kuyizicelo ezivamile zabahlanganisi be-Hielscher's ephezulu ye-batch. Ukuxutywa kwe-batch ye-Ultrasonic kwenziwa ngejubane eliphezulu ngemiphumela ethembekile, evuselelayo yemiphumela yenqubo ephakeme kwelebhu, ebhentshini kanye nase…
I-Nanocellulose yisengezo esisebenza ngokuphezulu esisetshenziswa ngempumelelo njenge-rheology modifier, i-ejenti yokuqinisa kanye nesengezo ezintweni zokwenziwa okuphezulu nezinhlelo zokusebenza. Imicu ye-nano ehlelwe kahle ingahlukaniswa kahle kakhulu kunoma yimuphi umthombo oqukethe iselula nge-homogenization enamandla amakhulu we-ultrasonic kanye…
400 pages in total
Buyela ekhasini langaphambili